08/07/14 ~ MM Daily Star
ပဲခူးမြို့ မြစ်ရေတက်နေချိန် အဖက်ဖက်မှ ကူညီပေးနေသော...
လွှတ်တော်အမတ် ဦးသိန်းညွှန့် ဘယ်လဲ ဘာလဲ ?
ရှစ်လေးလုံး အရေးအခင်း ခေါင်းဖြတ်ပြီး အရပ်တကာလှည့်ခ...
နာမည်ကျော် မုဒိမ်းမှုကို အမှတ်ရစေသည့် ဓာတ်ပုံမျာြးေ...
အသုံးပြုပြီးသား ကွန်ဒုံးများ၊ စွန့်ပစ်အတွင်းခံများ...
ရေဘေးဒုက္ခသည်ရောက်နေသူ ပြည်သူများမှ တပ်မတော်သားများ...
ပြည်ကြားရေးဝန်ကြီးဖြစ်ပြီးနောက် ပိုမိုပြတ်သား မာကေ...
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် (၄၇) နှစ်မြောက် အာဆီယံ...
တပည့်ဖြစ်သူနှင့် ဖောက်ပြန်နေသည့် လိင်ပညာပေးသင်တန်း...
ပဲခူးမြို့ မြစ်ရေတက်နေချိန် အဖက်ဖက်မှ ကူညီပေးနေသော တပ်မတော်သားများနှင့် ကြံ့ဖွံ့ပါတီဝင်များ
20:14 တပ်မတော် သတင်း No comments
18:00 အင်တာဗျူးများ No comments
မီဒီယာကို စိတ်ဝင်စားသူ၊ လေ့လာသူ၊ တစ်ဖက်မှာတော့ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီး။ ဒီတော့ မီဒီယာတွေကို ပြန်ပြီး ထောက်ပြ တည့်မတ်ဖို့ ကြိုးစားတတ်သူ။ အဲဒီအခါ မီဒီယာ သမားတွေနဲ့ အငြင်းထွက်တဲ့ အထိ တစ်ခါ တရံ ပြဿ နာတွေ ရှိခဲ့ကြဖူးတယ်။ စစ်တပ်မှာ ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး ရာထူးအထိ သေနတ်ကိုင်ပြီး တပ်ပိုင်းဆိုင် ရာ တွေကို ဆောင်ရွက်ခဲ့သူက နောက်တော့ ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ချုပ် ကနေ အခု တော့လွှတ်တော်ရဲ့အတည်ပြု ချက်နဲ့ သြဂုတ် ၁ ရက်က စလို့ ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးအထိ ရာထူးအဆင့်ဆင့် တိုးကာ ကလောင်ကိုင်တဲ့ မီဒီယာ သမားတွေကို ကူညီသူ၊ ဝေဖန် စောကြော တတ်သူ ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးသစ် ဦးရဲထွဋ်ကို မဇ္ဈိမက မေးမြန်းထား ပါတယ်။
၀န်ကြီးအဖြစ် ရာထူးတိုးသွားတဲ့အတွက် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှာစတင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ကတည်းက စိတ်ကူးခဲ့တဲ့ လုပ်ငန်းတချို့ကို လုပ်ဆောင်ခွင့်ရပြီလို့ ခံစားမိပါတယ်။ လာမယ့်ကာလအတွင်းမှာ ဖြစ်အောင် လုပ်ချင်တာ နှစ်ခုပဲရှိပါတယ်။ ပထမတစ်ခုက အစိုးရနဲ့ စာနယ်ဇင်းများကြားမှာ ကျင့်ဝတ်နဲ့ အပြန်အလှန် လေးစားမှုကို အခြေခံတဲ့ မီဒီယာဆက်ဆံရေးထူထောင် ဖို့ပါ။ ဒုတိယတစ်ခုကတော့ အများပြည်သူဝန် ဆောင်မှုမီဒီယာဥပဒေ ပေါ်ထွက်လာခြင်း မရှိသေးသည့်တိုင် နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာများ ကို အများပြည်သူဝန် ဆောင်မှုမီဒီယာများရဲ့ လက္ခဏာများနဲ့ ဖြစ်နိုင်သမျှ ပြည့်စုံအောင် ဆောင်ရွက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
သမ္မတရဲ့ ပြောခွင့်ရပုဂ်္ဂိုလ်အဖြစ် ဆက်တာဝန်ယူမယ်လို့ သိရပါတယ်။ သမ္မတရဲ့ အကောင်းအဆိုး ဂုဏ် ရည်ကို မကာကွယ်ဘဲ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေအတွက် တံတိုင်းအဖြစ်မနေဘဲ တိုင်းပြည်နဲ့လူထုအကျိုးရည်တဲ့ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးအဖြစ် ပုံဖော်နိုင်မလား။ ဘယ်လိုပုံဖော်နိုင်မလဲ။ (ကိုယ်က ဦးဆောင်ပြမယ်၊ အစိုးရ၀န် ကြီးဌာနတွေမှာ သတင်းမီဒီယာဆိုင်ရာ တာဝန်ခံတွေ ပေါ်လာအောင် ဆောင်ရွက်မယ်စသဖြင့်)။
နိုင်ငံတကာမှာလည်း ပြောခွင့်ရပုဂ်္ဂိုလ် ဆိုတာဟာ မိမိကိုယ်စားပြုရတဲ့ ပုဂ်္ဂိုလ် / အဖွဲ့အစည်းရဲ့ မူဝါဒများကို ပြည်သူတွေ ပိုသိအောင်၊ ပိုပြီးနားလည်အောင်ဆောင် ရွက်ပေးရသူဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဖက်ကလည်း ပြည်သူ တွေက မိမိတို့အဖွဲ့အစည်းကို ဘယ်လိုထင်မြင်ယူဆတယ်ဆိုတာ သိအောင် လေ့လာပြီး အဖွဲ့အစည်းရဲ့ မူဝါဒချမှတ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များမှာ ပြည်သူ့သဘောထားကို ထည့်စဉ်းစားအောင် ဆောင်ရွက်ရသူဖြစ်ပါ တယ်။ ဒီအချက်ကို ကျန်ဝန်ကြီးဌာနများက သတင်းထုတ်ပြန်ရေးအရာရှိများ နား လည်အောင် စံနမူနာပြ လုပ်ဆောင်ပြဖို့ ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။
ဖေ့စ်ဘွတ်ဝန်ကြီးအဖြစ် လူသိများတယ်၊ ခင်ကြတယ်၊ စကြတယ်။ ၀န်ကြီးကလည်း မင်းတို့ရေးတာ မင်းတို့  တာဝန်၊ အဆင့်အတန်းဆိုပြီး ပြထားတယ်။ ဒါဟာလှုံ့ဆော်မှုလား၊ ဆွဲဆောင်မှုနည်းစနစ် တစ်ခုလား။ ပုံစံ ပြောင်းဖို့ ရှိပါသလား။
အဲဒါဟာ အသစ်ရရှိလာတဲ့ အင်တာနက်လွတ်လပ်မှုကို တာဝန်သိသိကျင့်သုံးတတ်အောင် ဆောင်ရွက်ပေး ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ဒီလိုဖွင့်ပေးထားတဲ့အတွက် ကျွန်တော့်စာမျက်နှာမှာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း လာရောက်ရေးသားအောင် ဆွဲဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါတလေ ရိုင်းစိုင်းတဲ့ ရေးသားချက်များ ကြောင့်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ရပေမယ့် အကျိုးကအပြစ်ထက်ပိုများတဲ့အတွက် ဒီအတိုင်းပဲ ဆက်ထား ပါ့မယ်။
မီဒီယာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ၀န်ကြီးကလေ့လာတယ်၊ ပြောတယ်၊ ရေးတယ်။ မီဒီယာတွေ မှားတာကို လည်းဝန်ကြီးကအော်လေ့ရှိတယ်။ မီဒီယာတွေကို ဘယ်လိုသဘောထားသလဲ။မီဒီယာတွေဟာ အစိုးရနဲ့ ပြည်သူများကြား၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းကကွဲပြားခြားနားတဲ့ အုပ်စုတွေ အချင်းချင်းကြား ဆက်သွယ်ပေး တဲ့ပေါင်းကူးတံတားပါ။ တံတားအရည်အသွေးကောင်းရင် ကူးလူး ဆက်ဆံမှု ကောင်းတာပေါ့။ တံတားပျက် နေရင်ဆက် ဆံရေးတွေ ပြတ်တောက်ပြီး နားလည်မှုလွဲဖို့ ပိုများတာပေါ့။
အစိုးရအာဘော်သတင်းစာတွေ (ကြေးမုံ၊ မြန်မာ့အလင်း)ကို ပုဂ္ဂလိကပိုင်အဖြစ် အစိုးရက ပြောင်းလဲပေး မယ်ဆို မဇ္ဈိမ အပါအ၀င် ပုဂ္ဂလိကသတင်းစာတွေက သဘောကျမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ဒါဆို တန်းညီပြိုင် ပွဲလည်း ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ ရုပ်သံကိုသာ ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုမီဒီယာ အဖြစ်ထားပြီး၊ အစိုးရအနေနဲ့ အစိုးရ အာဘော်သတင်းစာတွေကို ပုဂ္ဂလိကပိုင် သတင်းစာအဖြစ် လုပ်နိုင်/ မလုပ်နိုင်။ အကြောင်းပြချက်ပေးပါ။
ကျွန်တော်တို့ မီဒီယာပြုပြင်ပြောင်းလဲ ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ထဲက ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုက ပြည်သူတွေအနေနဲ့ မတူကွဲပြားတဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေကို ကွဲပြားခြားနားတဲ့ သတင်းအရင်းအမြစ် အမျိုးမျိုးဆီက ရရှိနိုင်ရေး တစ်နည်းအားဖြင့် ဗဟုမီဒီယာဝါဒထွန်းကားရေးနဲ့ မီဒီယာလက်ဝါးကြီး အုပ်မှု ဆန့်ကျင်ရေးဖြစ် ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ရုပ်သံမီဒီယာမှာရော၊ ပုံနှိပ်မီဒီယာမှာပါ အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှု၊ ပုဂ္ဂလိကနဲ့ လူမှု အခြေပြုမီဒီယာ Public, Private, Community Media များ ထွန်းကားအောင်ဆောင်ရွက်နေတာ ဖြစ် ပါတယ်။ ခင်ဗျားလည်း အင်္ဂလန်မှာ နေခဲ့တာပဲ။ မားဒေါ့ရဲ့ လက်ဝါးကြီးအုပ်မှုက ဗြိတိသျှရွေးကောက်ပွဲ အပေါ်ဘယ်လောက် သြဇာသက်ရောက်တယ်ဆိုတာ တွေ့ခဲ့မှာပါ။ ကျွန်တော်တို့ဆီ မှာ မြန်မာမားဒေါ့ လုပ်ချင်တဲ့သူတွေရှိတယ်။ ဒါကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက် အများပြည်သူ ၀န်ဆောင်မှုမီဒီယာ ကောင်းကောင်း ရှိဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ပုဂ္ဂလိကသတင်းစာ အဖြစ်ပြောင်းဖို့ အကြောင်းမရှိပါဘူး။
၀န်ကြီးက လူတွေနဲ့ နီးအောင်နေတယ်။ အတူစားတယ်၊ စကားပြောတယ်လို့ တင်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေအရ သိရပါတယ်။ အဲဒီလိုဆက်နေဦးမလား။ အန္တရာယ်တစ်ခု ခုရှိမှာကို မစိုးရိမ်ဘူးလား။ ၀န်ကြီးဌာနက ၀န် ထမ်းတွေနဲ့ရော အဲဒီလိုနေသလား။ ၀န်ကြီးကို သူတို့ ခင်ကြသလား။
ကျွန်တော့်ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ အခုလိုပဲ ရင်းရင်းနှီးနှီးနေပါတယ်။ တာဝန်အရပြောရဆိုရ၊ လုပ်ရတာက တစ်ပိုင်း ပေါ့။ လူမှုရေးပိုင်းကတော့ မိသားစုလိုပဲနေပါတယ်။ ကျွန်တော့်ကို ခင်၊ မခင်ဆိုတာက ကျွန်တော်ဆက် တိုက်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့ ပြန်ဆက်က ၀န်ထမ်းတွေကိုမေးတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ၀န်ကြီးဖြစ်တော့လည်း ဘာမှပြောင်းလဲစရာမရှိပါဘူး။ ပြည်သူတွေကြားကို တတ်နိုင်သမျှသွားမှာပါ။ နေပြည်တော်-ရန်ကုန် ကို အ ဝေးပြေးကားနဲ့ သွားတာမျိုးတော့ လုပ်ချင်မှ လုပ်နိုင် မှာပေါ့။ ပြည်သူတွေအသံကို ကြားရဖို့၊ သူတို့ကို နားလည် နိုင်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းက သူတို့ထဲကို ၀င်ရောက်ထိတွေ့ ခြင်းပဲလို့ ခံယူထားပါတယ်။ အန္တရာယ် အတွက် လည်းမစိုးရိမ်ပါဘူး။ သေတစ်နေ့ မွေးတစ်နေ့ပဲလေ။
17:00 အတုယူစရာ, နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးခန်းများ 1 comment
၂၉-၇-၂၀၁၄၊ (၃၇) ရက်မြောက်နေ့ ….
ဦးအောင်ဇင်၊ ပုဇွန်တောင်မဲဆန္ဒနယ်၏ ….
ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော် နှင့် လိုက်လျောညီထွေမှုရှိမည့် ….
ဒီမိုကရေစီစနစ်တစ်ခုကို ပိုမိုဖော်ဆောင်နိုင်သော ….
အချိုးကျကိုယ်စားပြုစနစ်ကို အခြေခံသည့် ရွေးကောက်ပွဲ နည်းလမ်းကို ….
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ပွဲအတွက် ….
ဦးသိန်းညွန့်၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမဲဆန္ဒနယ်၏ ဆွေးနွေးချက် …
လေးစားအပ်သော ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီး နှင့် ….
ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ခင်ဗျား ….
ထောင်ထဲမှာ ၂၇ နှစ်နေခဲ့ပြီးတော့ ….
၇၁ နှစ်အရွယ်မှာ ပြန်လွတ်ခဲ့တဲ့ ….
တောင်အာဖရိက ခေါင်းဆောင်ကြီး Nelson Mendela ဟာ ….
၁၉၉၀ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၁ ရက်နေ့ …
လွတ်ပြီးတော့ လေးနှစ်အကြာမှာ ….
တောင်အာဖရိကမှာ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပခဲ့ပါတယ် …..
တစ်ချိန် တုန်းက သူ့မျက်လုံးကိုယ်ဖောက် ….
ကိုယ့်မျက်လုံး သူဖောက်တဲ့ အသားရောင်ခွဲခြားတဲ့စနစ် ….
အကြမ်းဖက်ဝါဒ တွေ လွှမ်းမိုးနေတဲ့ တောင်အာဖရိကဟာ ….
အဲ့ဒီပြဿနာကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းခဲ့သလဲဆိုရင် …
အခုလေ့လာကြည့် တဲ့အခါမှာ …..
အချိုးကျ ကိုယ်စားပြုစနစ်နဲ့ …
ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ဖြေရှင်းခဲ့ပါတယ် …..
အဲ့ဒီမှာ သူ့ရဲ့ ANC ပါတီက ၅၂ ရာခိုင်နှုန်း ….
အရင်အစိုးရဟောင်းက ၃၂ ရာခိုင်နှုန်း ….
နောက်တစ်ခါ အသားရောင်ရှိတဲ့လူတွေက ၈ ရာခိုင်နှုန်း ….
အဲ့ဒီလို အချိုးကျရတဲ့စနစ်နဲ့ ….
တောင်အာဖရိကဟာ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးမှတစ်ဆင့် …..
ဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်းကို သွားခဲ့ပါတယ် ….
အခု သမ္မတသုံးဆက် ….
သမ္မတရွေးပွဲ သုံးကြိမ် Jacab Zuma အထိ …..
ငြိမ်းချမ်းစွာအာဏာ လွှဲပြောင်းပေးနိုင် ခဲ့ပါတယ် ….
အဲ့ဒီမှာလည်း တိုင်းရင်းသားတွေအတွက် ….
သူနဲ့မသင့်မြတ်တဲ့ Zulu တွေတောင် …..
၁၁ ရာခိုင်နှုန်း ပါလီမန်ထဲမှာ အချိုးကျရခဲ့ပါတယ် …..
နောက် ဒုတိယစံနမူနာတစ်ခုကတော့ …..
ကျွန်းပေါင်း ၁၂၀၀၀ ရှိပြီးတော့ ….
လူဦးရေ သန်း ၂၅၀ ရှိတဲ့ လူမျိုးစု ၃၀၀ ကျော်ရှိတဲ့ …..
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ အတွေ့အကြုံပါ ….
အချိုးကျကိုယ်စားပြုတဲ့စနစ်ကို အခြေခံပြီးတော့ ….
ပါလီမန်ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ခဲ့တယ် …..
သမ္မတရွေးပွဲ လုပ်တယ် ….
ကနေ့ဆိုရင် ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းကြီး Yudhoyono ကို ….
အတိတ်စစ်အာဏာရှင်တွေနဲ့ မပတ်သက်တဲ့ Widodo ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကို …..
အင်ဒိုနီးရှားမှ သမ္မတအဖြစ် တင်မြှောက်လိုက်နိုင်တာကလည်း ….
ဒါက အချိုးကျကိုယ်စားပြုစနစ်ပါပဲ …..
ကနေ့အထိ အချုပ်အခြာအာဏာကို အသက်ပေးပြီးတော့ ….
အခုအချိန်ထိ သက်စွန့်ဆံဖျားကာကွယ်နေတဲ့ အစ္စရေးနိုင်ငံပါ …..
ဟစ်တလာကြောင့် ခြောက်သန်း ကျော်သေခဲ့ပြီးမှ ….
ပေါ်ပေါက်လာရတဲ့ ဂျူးတွေရဲ့နိုင်ငံပါ ….
သူတို့က ဘာကိုကျင့်သုံးခဲ့လဲ ….
အချိုးကျကိုယ်စားပြု စနစ်ကို ကျင့်သုံးပြီးတော့ ….
သူတို့နိုင်ငံရဲ့ အချုပ်အခြာအာဏာတည်မြဲစေရေးကို ….
စိုက်လိုက်မတ်တတ် ဆောင်ရွက်နေပါတယ် ….
ကျွန်တော်တို့လို အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး လိုအပ်တဲ့အချိန် ….
တိုင်းရင်းသားတွေပြဿနာ ဖြေရှင်းတဲ့နိုင်ငံတွေမှာ ….
လက်တွေ့အလုပ်ဖြစ်မယ်ဆိုတာ ဖော်ပြနေပါတယ် ….
အဲ့ဒီ နိုင်ငံသုံးခုလုံးမှာ ….
ဒီနေ့ ဒီမှာထောက်ပြနေတဲ့ အကြမ်းဖက်သမားတွေ ….
လွှတ်တော်ထဲရောက်လာတာ မတွေ့ရပါဘူး ….
လေးစားအပ်သော ဥက္ကဋ္ဌကြီးခင်ဗျား ….
အဲ့ဒီတော့ အချိုးကျစနစ်ကို ဘယ်အချိန်လုပ်မလဲ ….
ဘယ်အချိန် လုပ်မလဲဆိုတဲ့ အခါမှာ …
နှစ်ပါတီလွှမ်းမိုးမှု အနည်မထိုင်သေးတဲ့အချိန် ….
အခုလို ရွေးကောက်ပွဲသက်တမ်း တစ်ကြိမ်ကာလအတွင်းမှာ …
ကနေဒါမှာ ယနေ့ Green Party ဆိုတာ ….
နှစ်ပေါင်း ၂၀ ရှိပါပြီ ….
၉ ရာခိုင်နှုန်း ထောက်ခံမဲတွေရခဲ့ပါတယ် ….
သို့သော် ပါတီကြီးနှစ်ခု လွှမ်းမိုးထားတဲ့ Liberal နဲ့ ….
Conservative Party တွေက အချိုးကျစနစ်တင်လာတိုင်း …
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ပါတီငယ်တွေဝင်လာလို့ ရှိရင် ….
နေရာဖယ်ပေးရမှာကြောက်လို့ အခြေအနေမျိုးရှိပါတယ် ….
အဲ့ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့က ….
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကောင်းကျိုးအတွက် ….
နှစ်ပါတီ လွှမ်းမိုးတဲ့စနစ်ကိုသွားမလား …
အတိတ်ကအတွေ့အကြုံတွေ ကျွန်တော်တို့ ရခဲ့ပါတယ် ….
ဒုတိယ ပါတီစုံပါပြီးတော့ ….
အသံစုံနဲ့ တိုင်းပြည်ရဲ့အကျိုးကို ကျွန်တော်တို့လုပ်မလား ….
၂၀၁၅ အလွန် ရွေးကောက်ပွဲမှာ ….
ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ ဆင်းရဲမွဲတေမှု တိုက်ဖျက်ဖို့ ….
ဖွံ့ဖြိုးမှုကို မြှင့်တင်ဖို့ဆိုရင် ….
ညီညွတ်ရေးအစိုးရ လိုပါတယ် ….
ဒီညီညွတ်ရေး အစိုးရကို …
အချိုးကျစနစ်ကသာလျှင် ရွေးချယ်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ် ….
စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှု ပညာကို …
ကျွန်တော်တို့ အချိုးကျစနစ်မှ ရယူပြီးတော့ ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင် ….
အခုစိုးရိမ်ပူပန်တဲ့ ပြဿနာ တွေအားလုံး ….
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၇ ဟာ ….
စစ်မှန်တဲ့၊ စည်းကမ်းပြည့်တဲ့ ….
ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ၃၉၇ မှာ ….
ရွေးကောက်ပွဲ စနစ်ကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က ….
ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ပါတယ် ….
ဒီလိုပြဋ္ဌာန်းတဲ့ ၃၉၇ သည် ….
၄၃၆ အရ ဆန္ဒခံယူပွဲလုပ်ရန်မလိုတဲ့ ….
အခန်း (၉) ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်ဖြစ်ပါတယ် ….
ဒါကြောင့် ဒီနေ့ အချိုးကျစနစ်ကို ရွေးမလား ….
နိုင်သူ အကုန်ယူစနစ်ကိုရွေးမလားဆိုတာ …
တိုင်းပြည်မျက်နှာတစ်ခုတည်းကို ကြည့်ပြီးတော့ ….
ကျွန်တော်တို့ ဒီအချိုးကျစနစ်ကို …
ကျွန်တော်တို့ ထောက်ခံအားပေးဖို့ လိုပါတယ် ….
ကျွန်တော် နောက်ဆုံးပြောချင်တာကတော့ …
ဒီ တောင်အာဖရိက ခေါင်းဆောင်ကြီး ….
အဲဒါကတော့ ဘာလဲဆိုတော့ ….
အရှည်ကို မျှော်ကြည့်ကြပါ …
ရေရှည်ကို ကြည့်ကြပါဆိုတာကို သတိပေးရင်းနဲ့ ….
ကျွန်တော့်ရဲ့ ဆွေးနွေးချက်ကို နိဂုံးချုပ်ပါတယ် …. ။ ။
ရှစ်လေးလုံး အရေးအခင်း ခေါင်းဖြတ်ပြီး အရပ်တကာလှည့်ခဲ့ခြင်း (၂)
16:00 ၈၈ များ, ဖြစ်ရပ်မှန် ဇာတ်လမ်းများ No comments
(ရှစ်လေးလုံးမှာ ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြသည်သာမက ခေါင်းဖြတ်ပြီး လှံသွားချွန်ဖြင့် အောက်လည်ပင်းမှ ထိုးစိုက်ကာ မြို့တွင်း အရပ်တကာ လှည့်လည် ပြသခဲ့ပါသည်။ ရှစ်လေးလုံးမှာ ဘာတွေ ဖြစ်ခဲ့သလဲ သမိုင်းအမှန်ကို လူငယ်တွေသိစေဖို့)
သလ္လာဝတီမြို့တော်က အကျည်းတန်သော ဖြစ်ရပ်တစ်ခု
သလ္လာဝတီမြို့ခေါ် မုံရွာမြို့က ကျွန်တော်ရဲ့ ဇာတိချက်ကြွေ၊ မွေးရပ်မြေ။ ကျွန်တော်တို့ မြို့က အခြားမြို့များနှင့်မတူ အတော်ထူးသည်။ “ ထူးရင်ထူး၊ မထူးရင်ရူး” ဆိုသလို ထူးလို့များ ရူးနေလားမသိ။ ပြီးခဲ့တဲ့ အရေးအခင်းကာလတွင်းက မဖြစ်သင့် မဖြစ်ထိုက်သည့် ကိစ္စများ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
အဆိုးဆုံးဖြစ်ရပ်တစ်ခုကတော့ လူ ၃ ဦးကို ခေါင်းဖြတ်သတ်ဖြတ်ပြီး လှံသွားချွန်ဖြင့် အောက်လည်ပင်းမှ ထိုးစိုက်ကာ မြို့တွင်း အရပ်တကာ လှည့်လည် ပြသခြင်းဖြစ်သည်။ မြို့သူမြို့သား မြင်ရသူအားလုံး အထိတ်တလန့် ဖြစ်ကြရသည်။ တစ်မြို့လုံး ခြောက်ခြား သွားခဲ့ကြရသည်ဟုလည်း သိရသည်။
ခေါင်းဖြတ်သတ်ခံရသူ ၃ ဦးက ဆန္ဒပြသူများကို ဆန့်ကျင်ကြသူများ မဟုတ်ကြ။ အစိုးရကို ထောက်ခံကြသူများလည်း မဟုတ်ကြ။ ဆန္ဒပြသူ အချင်းချင်းသာ ဖြစ်သည်။ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟမီးတွေ တစ်ဟုန်းဟုန်း တောက်လာခြင်းကြောင့် အချင်းချင်းကိုပင် မရှောင် တိုက်ခိုက်ကြသည်။ သတ်ဖြတ်ကြသည်။ ဇာတ်တူသားချင်း စားကြသည်ဟု ပြောနိုင်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ မုံရွာမြို့တွင် ဆန္ဒပြအဖွဲ့ ၂ ဖွဲ့ရှိသည်။ “ပြည်သူ့သမဂ္ဂ” အဖွဲ့ကို ဘုန်းတော်ကြီး ဦးသုမနက ခေါင်းဆောင်သည်။ မုံရွာမြို့ “ ဆုတောင်းပြည့်” ဘုရားကြီးဝင်း အတွင်းတွင် သပိတ်စခန်းဖွင့်ထားသည်။ အခြားတစ်ဖွဲ့ကတော့ “ ပြည့်သူ့သံဃာ” အဖွဲ့ ဖြစ်ပြီး ကိုသိန်းတန်ဆိုသူက ခေါင်းဆောင်၊ ဝင်းမြင့်က ဒုတိယ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သည်။ ယင်းအဖွဲ့က အုန်းခြံရပ်၊ အမှတ် (၂) အစိုးရ အလယ်တန်းကျောင်းဝင်း အတွင်းတွင် အခြေ ပြုသည်။
အထက်ပါ ပြည်သူ့သမဂ္ဂနှင့် ပြည့်သူ့သံဃာသပိတ်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့က အစပိုင်းတွင် ညီညီ ညွတ်ညွတ်ဖြင့် ပူးတွဲ ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ ပူးတွဲလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။ မြို့မိမြိုဖများ၊ မြို့သူ မြို့သားများ၊ ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၊ ရဟန်းသံဃာတော်များပါ ပါဝင်ကြရာ အင်အား ၄၀၀၀ ကျော်ခန့်လောက် ရှိသည်ဟု သိရသည်။ ပြည်သူလူထု၏ အကူအညီ အထောက်အပံ့များလည်း အတော်များများ ရရှိခဲ့သဖြင့် ရန်ပုံငွေများ၊ ဆန်၊ ဆီ၊ ဆား စသည့် ရိက္ခာပစ္စည်းများလည်း အလွန်ပြည့်စုံသည်ဟု ဆိုသည်။ မြို့အုပ်ချုပ်ရေးကိုလည်း အလျဉ်းသင့်သလို ခွဲဝေတာဝန်ယူလျက်ရှိရာ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ထိပ်တိုက် တိုးခြင်းများ၊ အချင်းချင်း မသင့်မြတ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်။ ရရှိထားသော အလှူငွေများ၊ ရိက္ခာပစ္စည်းများ ခွဲဝေရာတွင်လည်း သဘောထားကွဲလွဲမှုများကြောင့် တစ်နေ့တစ်ခြား မသင့်မြတ်မှုများ၊ အဆင်မပြေမှုများ တိုးပွားလာပြီး တစ်ဖွဲ့နှင့်တစ်ဖွဲ့ ပူးပေါင်းလို့ မရတော့ဘဲ ရန်သူများအသွင် ကူးပြောင်းသွားတော့သည်။ အစည်းအဝေး တစ်ခုတွင် ထိုးကြ၊ ကြိတ်ကြ၊ နပန်းလုံးကြသည်အထိ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရပြီး ကြည့်မကောင်း၊ ရှုမကောင်း၊ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ အတော်စိတ်ပျက်ခဲ့ကြရသည်။ ထိုနေ့မှ စ၍ တစ်ဖွဲ့နှင့်တစ်ဖွဲ့ လမ်းမှာတွေ့လျှင် ဦးသူက လောက်လေးခွ၊ ဂျင်ကလိတို့နှင့် ပစ်ခတ် ကြသည်ဟု သိရသည်။
ကျောင်းသား ၃ ဦး အဖမ်းခံရခြင်း
တစ်နေ့တွင် “ပြည်သူ့သမဂ္ဂ”မှ ကျောင်းသား ၃ ဦး “ ပြည့်သူ့သံဃာ” သပိတ်စခန်းသို့ ရုပ်ဖျက်ပြီး သွားရောက်ချောင်းမြောင်း ထောက်လှမ်းစဉ် ဖမ်းဆီးခြင်း ခံရသည်။ ယင်း ကျောင်းသား ၃ ဦးအား ခေါင်းဖြတ်သတ်မည်ဖြစ်ပြီး မြို့မိမြို့ဖများ လာရောက် ကြည့်ရှုရန် “ ပြည့်သူ့သံဃာ” အဖွဲ့က ဆင့်ခေါ်သည်။ ခေါင်းဖြတ်မည့် အစီအစဉ်ကလည်း အခြား နေရာတွေမှာလို ဓားနှင့် ခုတ်ဖြတ်ခြင်း မဟုတ်။ သစ်စက်လွှစင်တွင် တင်ပြီး သစ်ခွဲသလို လွှဖြင့် လည်ပင်းမှ ဖြတ်ရန်ဖြစ်သည်။ ထိုနေ့က မီးမလာသဖြင့် လွှဝိုင်းကို လက်ဖြင့်လှည့်ပြီး ဖြတ်ရန်စီစဉ်နေသည်ကို မြို့မိမြို့ဖ ၆ ဦးခန့်က ကျောင်းသားလေးတွေကို မသတ်ဖို့၊ ပြန်လွှတ်ပေးဖို့၊ ဝိုင်းဝန်းတောင်းပန်သဖြင့် မသတ်ဖြတ်ဘဲ လွှတ်ပေးခဲ့ကြသည်။
ထိုသို့ ကျောင်းသားလေးများကို ဖမ်းဆီးပြီး ခေါင်းဖြတ်သတ်ရန် စီစဉ်ခဲ့သော “ပြည့်သူ့သံဃာ” သပိတ်အဖွဲ့၏ လုပ်ဆောင်ချက်ကို “ပြည်သူ့သမဂ္ဂ” သပိတ်အဖွဲ့က လုံးဝမကျေနပ်။ အာဏာခွဲဝေမှုတွင်လည်းကောင်း၊ ရရှိသော ငွေ၊ ရိက္ခာ၊ ပစ္စည်းများ ခွဲဝေရာတွင်လည်းကောင်း မသင့်မြတ်မှုများ ရှိနေပြီးဖြစ်၍ “ ပြည့်သူ့သံဃာ” အဖွဲ့ကို တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းရန် စီစဉ်ခဲ့ကြတော့သည်။ လက်စားချေဖို့ လုပ်ကြတော့သည်။
အခွင့်ကောင်းစောင့်နေသော “ပြည်သူ့သမဂ္ဂ”အဖွဲ့က အမှတ် (၂) အစိုးရ အလယ်တန်း ကျောင်းဝင်း အတွင်းရှိ သိန်းတန်နှင့် ဝင်းမြင့်တို့ ခေါင်းဆောင်သော “ပြည့်သူ့သံဃာ” အဖွဲ့ကို အလစ်အငိုက် ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ကြတော့သည်။ မုံရွာမြို့တွင် စစ်မြေပြင်က တိုက်ပွဲလေး တစ်ခုသဖွယ် သေနတ်သံများက ဆူညံသွားတော့သည်။ နှစ်ဖက်လုံး သေနတ်သုံးကြသည်။ ရဲစခန်းများမှ ကြိုတင်သိမ်းဆည်းထားခဲ့ကြသော သေနတ်များနှင့် လိုင်စင်ဖြင့် ကိုင်ဆောင်ကြသော သေနတ်များဖြင့် ပစ်ခတ်ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ သေနတ်များက မျိုးစုံသည်။ ရိုင်ဖယ်လည်း ပါသည်။ စတင်းသေနတ်လည်း ပါသည်။ နှစ်လုံးပြူး သေနတ် (DB) လည်းပါသည်။ အသေအပျောက်ရှိသည်ဟုတော့ မကြားရ။ ဒဏ်ရာရကြသူတွေတော့ အတော်များသည်ဟုဆိုသည်။ အော်သူအော်၊ သွေးအလိမ်းလိမ်းနှင့် ပြေးသူပြေး ငိုသူ ငို၊ ကျွန်တော်တို့ မြို့တွင် ကမ္ဘာပျက်သလို ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ အချင်းချင်း ကလဲ့စား ချေလိုစိတ်၊ မကျေနပ်ချက်များနှင့် အာဃာတများ ကြောင့်လား သို့မဟုတ် မကောင်းဆိုးဝါးများက အတင်းတိုက်တွန်း နေလို့လားမသိ၊ ကိုယ့်တစ်မြို့တည်းသားချင်း၊ ဇာတ်တူသားချင်း တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် ကျွန်တော်တို့မြို့ သွေးမြေကျခဲ့ကြရသည်။
ဦးသုမန၊ ပြည်သူ့သမဂ္ဂ အနိုင်ရ
“ပြည်သူ့သမဂ္ဂ” သပိတ်အဖွဲ့က လူအင်အားလည်း များသည်။ တိုက်ပွဲအတွက် စနစ်တကျ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးမှ အလစ်အငိုက် ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းလည်း ဖြစ်တော့ “ ပြည့်သူ့သံဃာ” အဖွဲ့ ရှုံးသွားသည်။ ခေါင်းဆောင်သိန်းတန်၊ ဝင်းမြင့်နှင့် အခြားတစ်ဦး (အမည်မမှတ်မိတော့) ဖမ်းဆီးခံရသည်။
ပြောမယုံ ကမ်းကုန်အောင် ရက်စက်လိုက်ပုံက
ဖမ်းဆီးရမိသူ သိန်းတန်၊ ဝင်းမြင့်နှင့် အခြားသပိတ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး ပေါင်း ၃ ဦးတို့ကို ကြိုးတုပ်ပြီး “ပြည်သူ့သမဂ္ဂ” အခြေစိုက်ရာ ဆုတောင်းပြည့်ဘုရားကြီး အတွင်းသို့ ခေါ်သွားကြသည်။ ဘယ်အငြိုးနဲ့များ ငြိုးလေသည်မသိ။ ရောက်ရောက်ချင်း သံချွန်တွေနှင့် တစ်ကိုယ်လုံး ထိုးကြသည်။ အစာမကျွေး၊ ရေမတိုက်၊ အငတ်ထားသည်။ အသားတွေ ပါးပါးလှီး၊ လူမဆန်သောနည်းများဖြင့် နှိပ်စက်ကြသည်။ နောက်ဆုံး ရေနှစ်၊ ခေါင်းဖြတ် သတ်လိုက်ကြသည်ဟု သိရသည်။ သွေးဆူနေသော ကျောင်းသားလေးများက သိန်းတန် တို့၏ ခေါင်းပြတ်ကြီး ၃ လုံးကို လှံချွန်နှင့် လည်ပင်းမှ ထိုးစိုက်ပြီး တစ်မြို့လုံး လျှောက်ပြ ကြသည်။
ဒီလို အဖြစ်များ မကြားလိုပါ
ကျွန်တော် ခေါင်းဖြတ် အသတ်ခံရသူများကို မသိပါ။ ခေါင်းဖြတ်သူများ၏ ခေါင်းဆောင် ဦးသုမနကိုလည်း မသိပါ။ မြို့မိမြို့ဖ လူကြီးအချို့ကိုတော့ သိပါသည်။ ကျောင်းသား ၃ ဦး၏ အသက်ကို ကယ်တင်ခဲ့ကြသူများကို အထူးကျေးဇူး တင်ရပါသည်။ ဤကဲ့သို့ ဇာတ်တူသားစားခြင်း၊ အငြိုးဖြင့် ကလဲ့စားချေခြင်း၊ ရက်ရက်စက်စက် ညှင်းပန်း နှိပ်စက်ပြီးမှ လူမဆန်စွာ သတ်ဖြတ်ခြင်းမျိုးလည်း ထပ်မံမဖြစ်စေလိုပါ။ အထူးသဖြင့် တစ်မြို့လုံး တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားသွားစေသည့် ခေါင်းပြတ်များကို လှည့်လည် ပြသခြင်း၊ ကျောင်းသားအရွယ် လူမမယ်လေးများ သွေးစွန်းသွားစေခြင်းမျိုးလည်း မလိုလားပါ။ ဘဝဆက်တိုင်း မမြင်ရ၊ မကြားရ၊ မတွေ့ရတဲ့ကိုယ် ဖြစ်ရပါလို၏လို့ပဲ ဆုတောင်း လိုက်ရ ပါတော့သည်။
နာမည်ကျော် မုဒိမ်းမှုကို အမှတ်ရစေသည့် ဓာတ်ပုံများကြောင့် ဝေဖန်ခံနေရသည့် အိန္ဒိယ ဓာတ်ပုံဆရာ
15:00 မုဒိန်း မှုများ, နိုင်ငံတစ်ကာ သတင်း No comments
အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို ဘတ်စ်ကားပေါ်တွင် အမျိုးသားတစ်စုက အုပ်စုဖွဲ့ အနိုင်ကျင့်နေဟန် ရိုက်ကူးထားသည့် ဖက်ရှင်ဓာတ်ပုံများကြောင့် အိန္ဒိယ ဓာတ်ပုံဆရာတစ်ဦး ပြင်းထန်သော ဝေဖန်မှုများနှင့် ကြုံနေရကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
အိန္ဒိယတွင် ဆေးကျောင်းသူ မိန်းကလေးတစ်ဦး ဘတ်စ်ကားပေါ်တွင် အုပ်စုဖွဲ့ မုဒိမ်းကျင့်ခံရပြီး အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့သည့် မှုခင်းမှာ ကမ္ဘာကျော် သတင်းတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ပြီး အိန္ဒိယ လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင် အမျိုးသမီးများကို အုပ်စုဖွဲ့ အနိုင်ကျင့်မှုများအပေါ် နာကြည်းမှုများ တိုးပွားလာခဲ့သည်။
ထိုအခြေအနေတွင် ဖက်ရှင်ဓာတ်ပုံဆရာ ရာ့ဂ်ျရှတ္တရီက The Wrong Turn အမည်ရှိ ဖက်ရှင်ဓာတ်ပုံ Collection တစ်ခုကို အင်တာနက်တွင် လွှင့်တင်ခဲ့သည်။ ယင်းဓာတ်ပုံများမှာ ဖက်ရှင်အဆန်းအပြားများ ဝတ်ဆင်ထားသည့် အမျိုးသမီး မော်ဒယ်လ်တစ်ဦးကို ဘတ်စ်ကား တစ်စီးပေါ်တွင် အမျိုးသားတစ်စုက ဝိုင်းဝန်း အနိုင်ကျင့်နေကြပုံကို ရှုထောင့် အမျိုးမျိုး၊ အနေအထား အမျိုးမျိုးဖြင့် ကိုယ်ဟန်ပြစေပြီး ရိုက်ကူးထားခြင်း ဖြစ်သည်။
ထိုဓာတ်ပုံများအကြောင်း မီဒီယာများက ဖော်ပြကြရာမှ ဝေဖန်မှုများ မြင့်တက်လာသည့်နောက် အင်တာနက်ပေါ် လွှင့်တင်ထားရာမှ ပြန်လည် ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့သည်။ (၂၀၁၂)ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလက မိန်းကလေးတစ်ဦး၊ ဒေလီရှိ ဘတ်စ်ကား တစ်စီးပေါ်တွင် အုပ်စုဖွဲ့ မုဒိမ်းကျင့်ခံရပြီး အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည့် ဖြစ်ရပ်မှာ အဆိုပါ ဓာတ်ပုံများကြောင့် အမှတ်ရစရာ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ရှတ္တရီကမူ မိမိ၏ ဓာတ်ပုံများသည် အဆိုပါ ဖြစ်ရပ်ကို အခြေခံထားခြင်းမဟုတ်ဟု ကာကွယ် ပြောကြားခဲ့သည်။
Buzzfeed နှင့် အင်တာဗျူးတွင် ရှတ္တရီက “ဒီဖြစ်ရပ်နဲ့ မဆိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ကို ဓာတ်ပုံဆရာ တစ်ယောက်ရဲ့ အတွင်းစိတ်အမြင်နဲ့ ရိုက်ကူးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်မှာ အမေ၊ ညီမ၊ ချစ်သူတို့ ရှိနေပါတယ်။ ဒီဖြစ်ရပ်မျိုး သူတို့လည်း ကြုံနိုင်တယ်ဆိုတာ ကျွန်တော် နားလည်ပါတယ်”ဟု ဆိုသည်။ (၂၀၁၂)ခုနှစ်၊ မှုခင်းဖြစ်ရပ်တွင် အသက် (၂၃)နှစ်အရွယ် ဆေးကျောင်းသူတစ်ဦးသည် အမျိုးသား သူငယ်ချင်း တစ်ဦးနှင့်အတူ ရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီး အိမ်ပြန်လာချိန်တွင် ဘတ်စ်ကားပေါ်၌ လူ(၆)ဦးက အုပ်စုဖွဲ့ မုဒိမ်းကျင့်ပြီး ရက်ရက်စက်စက် ညှဉ်းပန်း နှိပ်စက်ခဲ့ကြသည်။
အမျိုးသမီးကို စင်ကာပူသို့ ပို့ဆောင်ပြီး ကုသပေးခဲ့သော်လည်း (၁၃)ရက် အကြာတွင် အတွင်းဒဏ်ရာများကြောင့် သေဆုံးသွားခဲ့ပြီး အဆိုပါ ဖြစ်ရပ်သည် တစ်ကမ္ဘာလုံး တုန်လှုပ်လောက်စရာ သတင်းတစ်ခုအဖြစ် ကျော်ကြားခဲ့သည်။
အသုံးပြုပြီးသား ကွန်ဒုံးများ၊ စွန့်ပစ်အတွင်းခံများနှင့် ပုဂံဘုရားများကြားက ချစ်တင်းနှောသူများ၏ စိန်ခေါ်မှု
မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်း တန်ဖိုးထားဂုဏ်ယူရသည့် ရှေးဟောင်းမြို့တော်ပုဂံ [ဓာတ်ပုံ−ဂျေမောင်မောင်(အမရပူရ)]
လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်နီးပါးကတည်းက တည်ရှိခဲ့သည့် ရှေးဟောင်းမြို့တော် ပုဂံသည် မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် ဂုဏ်ယူစရာအကောင်းဆုံးများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပထမမြန်မာနိုင်ငံတော်မှာ ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် အဦးဆုံးမျိုးစေ့ချရာဖြစ်ပြီး ဒဏ္ဍာရီဆန်သော သမိုင်းကြောင်း၊ အံ့ဩဖွယ်ရာ ဗိသုကာလက်ရာများ၊ အနုပညာများမှာ နှောင်းလူသားတို့အတွက် လေ့လာသင်ယူစရာ မကုန်နိုင်အောင် ရှိနေသော ရှေးဟောင်းမြို့တော် ဖြစ်သည်။ မျက်မှောက်ကာလတွင် အံ့ဩစိတ်ပျက်စရာ ကြုံရလေလေ၊ အတိတ်က ဂုဏ်ယူစရာခေတ်ကာလများကို ပြန်တွေးသောအခါ ရှေးဟောင်းစေတီပုထိုးများ ပေါများလှသော ပုဂံက မပါမဖြစ်ပေ။
ထို့ကြောင့် မြန်မာများသာမက တစ်ကမ္ဘာလုံးမှ ခရီးသွားများ ရှေးဟောင်းမြို့တော်သို့ တကူးတက လာရောက်လေ့လာကြခြင်း ဖြစ်၏။
သို့သော် ယခုအခါ ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုမြို့တော်တွင် စိန်ခေါ်မှုကြီးတစ်ခု ကြုံနေရပြီဖြစ်သည်။ ထိုအရာက ခရီးသွားများအတွက် ကြီးစွာသော စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပြီး ရှေးဟောင်းမြို့တော်၏ ထည်ဝါလှသော ပုံရိပ်ကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်။
ရှေးလူတို့ ဝတ်ပြုဆုတောင်းမှုပြုရာ၊ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုဆိုင်ရာ ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများဖြစ်သည့် ပုဂံရှိစေတီပုထိုး ဂူကျောင်းအချို့သည် ယနေ့ခေတ်တွင်တော့ ချစ်တင်းနှောရာ နေရာတစ်ခု ဖြစ်လာခြင်းဖြစ်သည်။
ပြီးခဲ့သည့်ရက်များအတွင်း 7Day က ပုဂံဒေသသို့ သွားရောက်စုံစမ်းလေ့လာရာတွင် အသုံးပြုပြီးသော ကွန်ဒုံးအများအပြားကို စေတီပုထိုးများနှင့် ဝတ်ကျောင်းတော်များတွင် စွန့်ပစ်ထားသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။
(ရှေးဟောင်းမြို့တော် ပုဂံရှိ ချောင်ကျပြီး လူသူအရောက်အပေါက်နည်းသော စေတီပုထိုးအချို့ကို စုံတွဲအချို့ကို ချစ်တင်းနှောရာနေရာအဖြစ် အသုံးချနေသည်။ ရှေးဟောင်းစေတီပုထိုးအနီး စွန့်ပစ်ထားသော ကွန်ဒုံးအခွံများ/ဓာတ်ပုံ−ထွန်းခိုင်)
ဘုရားအမှတ် ၁၀၆၉ မှ စတင်ပြီး ၁၀၇၀ အထိ စေတီဝတ်ကျောင်းအများအပြား တစုတဝေးတည်းရှိရာ နေရာတစ်ခုတည်းတွင်ပင် အသုံးပြုပြီးသား ကွန်ဒုံးခုရေ ၁၀၀ ထက်မနည်း စွန့်ပစ်ထားသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ အချို့မှာ ဟောင်းနွမ်းနေပြီး အချို့မှာ မကြာသေးမီရက်ပိုင်းအတွင်းကမှ စွန့်ပစ်ထားကြသည့်ပုံစံများဖြစ်သည်။
အလားတူပင် ချောင်ကျပြီး လူသူအရောက်အပေါက်နည်းရာ ပုဂံဘုရားအများအပြားတွင်လည်း အသုံးပြုပြီးသား ကွန်ဒုံးများ စွန့်ပစ်ထားသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။
အချို့သော ဘုရားပုထိုးများတွင် အတွင်းခံဘောင်းဘီများ၊ တစ်စစီခွဲထားသည့် ဘီယာပုလင်းခွံများ၊ မွေ့ရာဟောင်းများကိုလည်း စွန့်ပစ်ထားသည့် ကွန်ဒုံးများနှင့်အတူ တွေ့ရသည်။
အဆိုပါအဖြစ်အပျက်များသည် ကမ္ဘာ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်စာရင်းဝင်ရန် ကြိုးပမ်းနေသည့် ပုဂံ၊ တစ်နှစ်တစ်နှစ် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည် သိန်းချီလာရောက်လည်ပတ်နေသည့်ပုဂံ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အသည်းနှလုံးအဖြစ် တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြသည့် ပုဂံဒေသအတွက် စိတ်ကသိကအောက်ဖြစ်စရာ စိန်ခေါ်မှုဖြစ်သည်။
ပျူမြို့ဟောင်းသုံးမြို့သည် မြန်မာတွင် ယူနစ်စကို၏ ပထမဆုံး ကမ္ဘာ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဒေသအဖြစ် သတ်မှတ်ခံရပြီး နောက်ထပ်ခြေလှမ်းတစ်ခုအဖြစ် ပုဂံအပါအဝင် ယဉ်ကျေးမှုမြို့ဟောင်းအချို့ကို ကမ္ဘာ့ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်စာရင်းတွင် ထည့်သွင်းနိုင်ရန် မြန်မာအစိုးရက ကြိုးစားလျက်ရှိသည်။
ယင်းကဲ့သို့သော အခြေအနေမျိုးတွင် ပုဂံဘုရားပုထိုးများ၌ ချစ်တင်းနှောသည့်ကိစ္စများ၊ စွန့်ပစ်ကွန်ဒုံးများမှာ အတားအဆီးတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း ပုဂံဒေသတွင် ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရှင်အဖြစ် ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့် ဦးအောင်ကြိုင်ကပြောသည်။
‘‘အခုလည်း ကုလသမဂ္ဂပညာရေး၊ သိပ္ပံနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ UNESCO တင်သွင်းဖို့ လုပ်နေတယ်။ ဒါတွေရှိရင် မကောင်းဘူးပေါ့’’ဟု ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးလည်းဖြစ်သူ ဦးအောင်ကြိုင်က မှတ်ချက်ပေးသည်။
ပညာရှင်များ၏ အဆိုအရ ပုဂံခေတ်ကောင်းစဉ်ကာလများဖြစ်သော ၇ ရာစုမှ ၁၃ ရာစုအထိ နှစ်ပေါင်း ၆၀၀ ကျော် (အချို့ကား ၇ ရာစုထက် စောနိုင်သည်ဟု ဆိုသည်) အတွင်း တည်ဆောက်ခဲ့သည့် ရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံများတည်ရှိရာ ပုဂံဒေသသည် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားများအကြား သွားရောက်လည်ပတ်ရန် တစ်နေ့တခြား စိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်လာသည့် ဒေသတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။
ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာ မပြုပြင်ဘဲထားသဖြင့် ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများ၊ ငလျင်ကဲ့သို့သော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ၊ မူလလက်ရာများ ထိန်းသိမ်းခြင်းမဟုတ်ဘဲ တပ်မတော်အစိုးရလက်ထက်တွင် အသစ်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းကဲ့သို့သော လူတို့ကြောင့် ရှေးဟောင်းလက်ရာများ ပျက်စီးမှုများရှိခဲ့သည့်တိုင်အောင် ပုဂံဒေသသည် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားများကို ဆွဲဆောင်နိုင်နေဆဲဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာတစ်ဝန်း စီးပွားရေးအကျပ်အတည်းများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည့်ကြားမှပင် အစိုးရသစ်လက်ထက်တွင် ပုဂုံဒေသသို့ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားအရေအတွက်မှာ တရိပ်ရိပ်တက်လျက်ရှိသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း ပုဂံဒေသသို့ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည် နှစ်သိန်းခန့် လာရောက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါအရေအတွက်သည် တစ်နှစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့သည့် ခရီးသွားစုစုပေါင်း၏ ၁၀ ပုံတစ်ပုံခန့်ဖြစ်သည်။ ယင်းစာရင်းဇယားအရ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည် ၁၀ ဦးလာတိုင်း တစ်ဦးမှာ ပုဂံကိုသွားနေခြင်းဖြစ်သည်။
ပုဂံဒေသသို့ လာရောက်ကြသည့် ခရီးသည်အရေအတွက်သည် တစ်နှစ်လျှင် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း ထပ်မံတိုးတက်လာမည်ဟု ခန့်မှန်းထားပြီး ယခုနှစ်တွင် ခရီးသွားသုံးသိန်းအထိ လာရောက်မည်ဟု မှန်းထားကြသည်။
အဆိုပါနိုင်ငံခြားသားခရီးသွားများကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ခရီးသွားလုပ်ငန်း ရာပေါင်းများစွာ အလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး ထောင်သောင်းချီသော နိုင်ငံသားများ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရေးများ ရလျက်ရှိသည်။
ခရီးသွားများကြောင့် နိုင်ငံအတွက်လည်း ဝင်ငွေဖြောင့်ခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း ဇုန်ဝင်ကြေးတစ်ခုတည်းပင် ဒေါ်လာသုံးသန်းနီးပါး ရရှိခဲ့သည်။ ယင်းပမာဏသည် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များအတွက် မဖြစ်မနေပေးဆောင်ရသည့် ဇုန်ဝင်ကြေးတစ်ခုတည်းအတွက်ဖြစ်ပြီး ခရီးသွားများ၏ အသုံးစရိတ်များ ထည့်သွင်းတွက်ချက်ပါက ယင်းပမာဏထက် များစွာပိုမည်ဖြစ်သည်။
မီးခိုးမထွက်သည့်စက်ရုံအဖြစ် နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အကျိုးပြုခဲ့သည့် ပုဂံခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက်လည်း စွန့်ပစ်ကွန်ဒုံးများနှင့် ဘုရားစေတီများအကြား ချစ်တင်းနှောမှုများမှာ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ရိုက်ခတ်လျက်ရှိသည်။
‘‘Package Toure (ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားတဲ့အစီအစဉ်နဲ့ လာသည့်ခရီးသွား)ဆိုရင် ပြဿနာမရှိဘူး။ နာမည်ကြီးတဲ့ဘုရားတွေကို လိုက်ပို့ပေးရုံပဲ။ တခြားဘုရားတွေကို သွားချင်တဲ့ခရီးသွားတွေဆိုရင်တော့ ရှောင်ပြီးပို့ပေးရတာပေါ့’’ဟု ပုဂံဧည့်လမ်းညွှန်အသင်းဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်ဝင်းချိုက ပြောသည်။
အဆိုပါမြင်ကွင်းများကို နာမည်ကျော်ကြားသည့် ဘုရားများသို့ သွားရောက်လည်ပတ်သည့် ခရီးသွားများ ရှောင်လွဲနိုင်မည်ဖြစ်သော်လည်း စက်ဘီး၊ ဆိုင်ကယ်များဖြင့် ဘုရားတိုင်းနီးပါး သွားရောက်လည်ပတ်ကြသည့် ခရီးသွားများအတွက်တော့ ထိပ်တိုက်တွေ့မြင်ရမည်မှာမလွဲ။
ယခုနောက်ပိုင်းနှစ်များတွင် နိုင်ငံခြားသားခရီးသွားများ အရောက်အပေါက်များလာသည့် မထင်မရှားဘုရားများတွင် စွန့်ပစ်ထားသည့် ကွန်ဒုံးများ၊ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကို ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားများမတွေ့စေရန် မြင်းလှည်းမောင်းသူများက ကိုယ်ပိုင်အစီအစဉ်ဖြင့် ရှင်းလင်းမှုများ ပြုလုပ်လျက်ရှိကြောင်း ပုဂံအခြေစိုက် ခရီးသွားလမ်းညွှန်များက ပြောသည်။
ပုဂံဒေသရှိ ဘုရားပုထိုးများတွင် ချစ်တင်းနှောခြင်းက ယခုမှစသည်တော့မဟုတ်။ ကာလရှည်ကြာ မကုဘဲထားသည့် ဝေဒနာတစ်ခုသည် ရောဂါရင့်မာလာသကဲ့သို့ပင် ယခင်ကတည်းကရှိခဲ့သည့် ယင်းဓလေ့သည် ယခုအခါတွင် ပိုမိုများပြားလာခြင်းသာဖြစ်သည်။
7Day မှ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သူတစ်ဦးက ဘုရားများတွင် ချစ်တင်းနှောနေခြင်းကို ၁၉၆၀ ဝန်းကျင်ကတည်းက မြင်တွေ့ဖူးကြောင်း ပြောသည်။ ထိုကာလထက်စောသည့် အချိန်ကတည်းက ယင်းအပြုအမူသည် ပုဂံဒေသတွင် ရှိနိုင်ကြောင်း ၎င်းကပြောသည်။
လာရောက်ချစ်တင်းနှောကြသူများထဲတွင် ပုဂံမြို့နှင့်အနီးတစ်ဝိုက်မှ ဒေသခံများ လူငယ်သဘာဝ ပျော်ပါးကြသည်များရှိသလို အခကြေးငွေပေးကာ ပျော်ပါးကြသူများလည်းရှိကြောင်း ဒေသခံများကပြောသည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် နိုင်ငံခြားသားခရီးသွားအချို့လည်း ပါဝင်ကြောင်း ၎င်းတို့ကပြောသည်။
7Day မှ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သူများထဲတွင် ပုဂံဒေသနှင့်အနီးတစ်ဝိုက်မှ ဒေသခံလူငယ်များလည်း ပါဝင်ခဲ့ပြီး ၎င်းတို့ထဲမှ အချို့သည် ကိုယ်တိုင်ချစ်တင်းနှောဖူးသူများ၊ အခြားသူများ ချစ်တင်းနှောသည်ကို တွေ့မြင်ခဲ့ဖူးသူများ ပါဝင်သည်။
၎င်းတို့၏ ပြောစကားများအရ ပုဂံဒေသသည် ရန်ကုန်အပါအဝင် အခြားမြို့များကဲ့သို့ လူငယ်များတွေ့ဆုံရန် ပန်းခြံ၊ ရုပ်ရှင်ရုံကဲ့သို့သော အပန်းဖြေနိုင်သည့် နေရာများမရှိခြင်းကြောင့် ချောင်ကျသည့် ဘုရားစေတီများသည် လူငယ်များ၊ သမီးရည်းစားစုံတွဲများ အချိန်းအချက်ပြုလုပ်သည့် တစ်ခုတည်းသော နေရာများဖြစ်လာသည်ဟု ဆိုသည်။
‘‘မြို့က အရမ်းကျဉ်းတော့ လူငယ်တွေချိန်းတွေ့ရင် သတင်းက ချက်ချင်းပြန့်သွားတယ်။ ရန်ကုန်လို ပန်းခြံတွေ၊ ဘာတွေလို လွတ်လွတ်လပ်လပ်တွေ့ဖို့လည်း အဆင်မပြေဘူး။ ဒီက ဟိုတယ်တွေ၊ တည်းခိုခန်းတွေကျတော့လည်း ဒီဒေသခံတွေပဲ အလုပ်လုပ်နေကြတော့ မျက်နှာသိတွေမို့ ဘယ်သူမှမသွားကြဘူး။ အဲဒါကြောင့် ချိန်းတွေ့ရင် ဘုရားပဲသွားနေကြတယ်’’ဟု အမည်မဖော်လိုသည့် အသက်(၂၅)နှစ်ခန့်အရွယ် ပုဂံမြို့မှ ဒေသခံအမျိုးသားတစ်ဦးက ပြောသည်။
တစ်နယ်တစ်ကျေးမှ လာရောက်သူများနှင့် စာဖတ်သူတို့အကြားတွင် အထူးအဆန်းသဖွယ် ဖြစ်နေသော်လည်း ဒေသခံအချို့တို့အဖို့တော့ နှစ်ရှည်လများကြုံတွေ့နေရသည့် အထက်ပါအဖြစ်အပျက်များက အထူးအဆန်းမဟုတ်တော့။
ဘုရားပုထိုးများတွင် ချစ်တင်းနှောနေသည့် ဖြစ်စဉ်များ တွေ့ပါက ဟန့်တားခြောက်လှန့်ခြင်းမျိုးထက် စောင့်ကြည့်ကြခြင်း၊ အဝေးသို့ထွက်သွားခြင်းမျိုးဖြင့်သာ တုံ့ပြန်မှုများက ပိုများကြောင်း ပုဂံဒေသတွင် နှစ်ပေါင်း ၂၀ နီးပါး ဧည့်လမ်းညွှန်အဖြစ် လုပ်ကိုင်နေသည့် ဦးကျော်ဆွေကပြောသည်။
‘‘စုံတွဲတွေက အဖော်တွေနဲ့ လာတာလည်းရှိတယ်။ လာဟန့်တဲ့သူက တစ်ယောက်တည်းလာလို့ရှိရင် အန္တရာယ်ပြုလွှတ်တာတွေလည်းရှိတယ်’’ဟု ဧည့်လမ်းညွှန်ဦးကျော်ဆွေက ပြောသည်။
ခေတ်အဆက်ဆက် အာဏာပိုင်များကလည်း ယင်းပြဿနာကို တားဆီးရန် ကြိုးပမ်းခဲ့ကြသည်။ ရှေးဟောင်းသုတေသနဦးစီးဌာနမှ အရာရှိများ၊ ဒေသခံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ဘုရားပုထိုးများသို့ သွားရောက်စစ်ဆေး၊ စောင့်ကြည့်ခြင်းဖြင့် ယင်းပြဿနာကို ထိန်းချုပ်ရန် ကြိုးပမ်းခဲ့ဖူးကြောင်း ရှေးဟောင်းသုတေသနအရာရှိဟောင်းအချို့က ပြောသည်။
သို့သော်လည်း စေတီပုထိုးများ၊ ဝတ်ပြုဆုတောင်းကျောင်းများ ထောင်နှင့်ချီပြီးတည်ရှိသည့် ပုဂံဒေသတွင် နေရာတိုင်း၊ အချိန်တိုင်းတော့ မည်သူမျှစောင့်မကြည့်နိုင်။ ၁၉၆၈ က ကောက်ယူထားသည့် စာရင်းများအရ ပုဂံဘုရားအရေအတွက်သည် ၂၂၁၇ ဆူရှိသည့်အတွက် ယင်းနေရာများကို အခါမလပ်စောင့်ကြည့်ရန် ၈ နာရီတစ်ဆိုင်း တာဝန်ယူမည့် ဝန်ထမ်းပေါင်း ၆,၆၀၀ ကျော် လိုအပ်မည် ဖြစ်သည်။
လက်ညှိုးထိုးမလွဲ နေရာမလပ်ရှိနေသည့် ပုဂံစေတီပုထိုးများအတွင်း ယင်းအပြုအမူမျိုး ပပျောက်သွားရန် ပညာပေးစည်းရုံးသည့် လှုံ့ဆော်မှုတစ်ရပ်ပြုလုပ်ခြင်းက အထိရောက်ဆုံးဖြစ်မည်ဟု ယူဆကြောင်း ပုဂံဧည့်လမ်းညွှန်အသင်းဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်ဝင်းချိုကပြောသည်။
‘‘ပညာပေးလှုံ့ဆော်ရေးအစီအစဉ် လုပ်မှရမယ်။ နေရာကကျယ်လွန်းတော့ ပညာပေးလှုံ့ဆော်ရေးအစီအစဉ်လုပ်တာ အကောင်းဆုံးပဲ’’ဟု ဦးဇော်ဝင်းချိုကပြောသည်။
ပုဂံဒေသတွင် အဆိုပါအပြုအမူမျိုးပပျောက်ရန် အပါအဝင် ပုဂံဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်း (NGO)တစ်ခု ဖွဲ့စည်းပြီး ဖြေရှင်းရန်ကြိုးစားနေကြောင်း ပုဂံမြို့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးလည်းဖြစ်သူ ဦးအောင်ကြိုင်က ပြောသည်။
လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၁,၀၀၀ ခန့်ကတည်းက မြို့ပြနိုင်ငံအဖြစ် ဖွံ့ဖြိုးနေသည့် ပုဂံသည် စစ်ပွဲများ၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များနှင့် လူလုပ်အဖျက်အဆီးများကို ကြံ့ကြံ့ခံရင်း တစ်ချိန်က သူ၏ကျော်ကြားမှုနှင့် ဂုဏ်ပကာသနတို့ကို ပြန်လည်ရရှိရန် အခွင့်အရေးတစ်ခုလမ်းပွင့်လာပြီ ဖြစ်သည်။
အစိုးရသစ်လက်ထက်တွင် နိုင်ငံရေးပွင့်လင်းမှုနှင့်အတူ သမိုင်းတွင် မည်သည့်အချိန်ကမှ မရှိခဲ့ဖူးသည့် အရေအတွက်မျိုးဖြင့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအနှံ့မှ ခရီးသွားများသည် ပုဂံ၏ခံ့ညားထည်ဝါမှုကို လာရောက်ကြည့်ရှုနေကြသည်။
ကမ္ဘာက စိတ်ဝင်စားသည်မှာ ရှေးမြန်မာတို့၏ ခမ်းနားပုံများသာ ဖြစ်လိမ့်မည်။ အသုံးပြုပြီးသား ကွန်ဒုံးများ၊ စွန့်ပစ်အတွင်းခံများ၊ တစ်စစီကွဲကြေနေသည့် ဘီယာပုလင်းခွံများနှင့် မွေ့ရာဟောင်းများကို ကြည့်ရှုရန်အတွက်တော့ မိုင်ပေါင်းထောင်ချီကာ လေယာဉ်စီးပြီး မည်သူမျှလာလိမ့်တော့မည်မဟုတ်။
အဆိုပါစိန်ခေါ်မှုကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် အဖြေရှာရမည်ဖြစ်သည်။
ရေဘေးဒုက္ခသည်ရောက်နေသူ ပြည်သူများမှ တပ်မတော်သားများမှ ထမင်းထုပ်၊ ရေသန့်ဘူးများ အိမ်တိုင်ရာရောက် လှူဒါန်း
မှော်ဘီ ၊ ၆-၈-၂၀၁၄
မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းသဖြင့် ယမန်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ၊ မှော်ဘီမြို့နယ် ၊ အမှတ်(၄) တိုးချဲ့ ရပ်ကွက်သစ် အတွင်းရှိ အိမ်ခြေ ၁၀၀၀ ခန့်၏ နေအိမ်ခြံဝင်း များနှင့် ရပ်ကွက် အတွင်း လမ်းများပေါ်သို့ ရေများ ၀င်ရောက်လျက် ရှိသဖြင့် ရန်ကုန်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ်မှ တပ်မတော်သား များက ရေနစ်မြှုပ် ခံရသော နေအိမ်များ ရှိ ဒေသခံ ပြည်သူများအား ထမင်းထုပ် ၂၀၀၅ ထုပ် ၊ ရေသန့်ဘူး တစ်လီတာဘူး ၁၀၀၀ ဘူး နှင့် ၂၀ လီတာ ၅၀ ဘူးတို့အား သွားရောက် လှူဒါန်း ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
ပြည်ကြားရေးဝန်ကြီးဖြစ်ပြီးနောက် ပိုမိုပြတ်သား မာကျောလာသည့် ဦးရဲထွဋ်နှင့် အင်တာဗျူး
အစိုးရသစ် သက်တမ်းသုံးနှစ်ကျော်ကျော်အတွင်း ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် အဆင့်မှ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတစ်ဦးအဖြစ် လျင်လျင်မြန်မြန် ရာထူးတိုးတက်သွားသူမှာ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဦးရဲထွဋ် ဖြစ်သည်။ ဒုဝန်ကြီးဖြစ်ပြီး မကြာမီမှာပင် သမ္မတဦးသိန်းစိန်၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအဖြစ်ပါ တာဝန်ယူခဲ့ပြီး အစိုးရ၀န်ထမ်းပုဂ္ဂိုလ်များအနက် လူမှုကွန်ရက်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှ သတင်းများ ပြန်ကြားပြောဆိုသည့်နေရာတွင် ပြိုင်ဘက်မရှိ နာမည်ကျော်သူလည်း ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် သမ္မတဦးသိန်းစိန်နှင့် အစိုးရအဖွဲ့ဝင်အချို့၏ ကမောက်ကမအလွဲများကိုလည်း ကာကွယ်ပြောဆိုလေ့ရှိသူ၊ အစိုးရ၀ါဒဖြန့်ချိရေးယန္တရား၏ အဓိကဇာတ်ဆောင်တစ်ဦးအဖြစ် လူသိများလှသည့်ဝန်ကြီး ဖြစ်သည်။ လက်ရှိတွင် အစိုးရ၏ တတိယလှိုင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အရှိန်မြှင့်လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ၀န်ကြီးတစ်ဦးဖြစ်လာသူ ဦးရဲထွဋ်နှင့် သတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်၊ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး မူဝါဒများအား မေးမြန်းထားသည်များကို ကောက်နုတ်ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
မေး- ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဖြစ်လာချိန်မှာ ၀န်ကြီးအနေနဲ့ ဦးစားပေးပြီး လုပ်သွားမယ့် လုပ်ငန်းတွေကို သိချင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အစိုးရသက်တမ်းက လပေါင်း ၂၀ ခန့်သာ ကျန်ရှိတော့တဲ့အတွက် ဒီအချိန်ကာလအတွင်းမှာ ၀န်ကြီးအကောင်အထည်ဖော်လိုတဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို ပြီးဆုံးအောင် လုပ်နိုင်မယ်လို့ ထင်ပါသလား။
မေး- ဒီမိုကရေစီစစ်စစ်နိုင်ငံကြီးတွေမှာ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနဆိုတာ မရှိသလို အစိုးရရဲ့ လုပ်ရပ်အကောင်းအဆိုးကို လွတ်လပ်တဲ့ မီဒီယာတွေကနေ မှတ်ကျောက်တင်ရေးသားကြပါတယ်။ အခုမြန်မာနိုင်ငံကလည်း ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို သွားနေတဲ့အချိန်မှာ ဒီပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနဟာ လိုအပ်တယ်လို့ ၀န်ကြီးအနေနဲ့ယူဆပါသလား။ဒါ့အပြင် ဒီဌာနဟာ မလိုအပ်ဘဲနဲ့ထားတဲ့အတွက် တိုင်းပြည်ဘဏ္ဍာတွေလည်း အလဟဿကုန်နေတယ်လို့ ဝေဖန်ပြောကြားမှုတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ၀န်ကြီးအနေနဲ့ ဒါကို ဘယ်လိုများ ပြောကြားလိုပါသလဲ။
ဖြေ- ဒီမိုကရေစီစစ်စစ်နိုင်ငံတွေမှာ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနမရှိဘူးလို့ ပြောတာကြားတိုင်း ကျွန်တော်အံ့သြမိတယ်။ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို တိုင်းတာတဲ့စံတွေထဲမှာ ၀န်ကြီးဌာနအမျိုးအစားနဲ့ သတ်မှတ်တဲ့ စံမပါပါဘူးဆိုတာ နိုင်ငံရေးသီအိုရီတွေ လေ့လာဖူးသူတိုင်း သိပါတယ်။ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးဖြစ်တဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ Ministry of Information and Broadcasting ဆိုပြီး ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ အဲဒီ ၀န်ကြီးဌာနကပဲ သတင်းထုတ်ပြန်ရေးသာမက ရုပ်သံမီဒီယာ၊ ပုံနှိပ်မီဒီယာများ၊ စာနယ်ဇင်းသင်တန်းများအတွက်လည်း တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေတာပါ။ နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေကိုလည်း အဲဒီဝန်ကြီးဌာနကပဲ တာဝန်ယူပါတယ်။ အဲဒီလိုပဲ ဒီမိုကရေစီမဆန်ဘူးလို့ နိုင်ငံတကာက ပြောနေတဲ့ နိုင်ငံအချို့မှာ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနမရှိပါဘူး။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာ ၀န်ကြီးဌာန ဖွဲ့စည်းမှုဆိုတာ နိုင်ငံရေးစနစ်နဲ့ မဆိုင်ပါဘူး။ နိုင်ငံရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအရ လိုအပ်ချက်နဲ့ပဲ ဆိုင်ပါတယ်။
ဖြေ- အစိုးရရဲ့ တတိယလှိုင်းမှာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတစ်ဦးရဲ့ တာဝန်ကတော့ မိမိဝန်ကြီးဌာနအလိုက် ဆောင်ရွက်နေတဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းများရဲ့ ရလဒ်ကို ပြည်သူများ အမြန်းဆုံး ရရှိခံစားဖို့ပဲလို့ အတိုချုပ်ပြောနိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ဆိုရင် သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အပါအ၀င် မီဒီယာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းများကြောင့် ပြည်သူတွေအနေနဲ့ မတူကွဲပြားသော သတင်းအရင်းအမြစ်များဆီက အရည်အသွေးပြည့်ဝတဲ့၊ ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျတဲ့ သတင်းအချက်အလက်များ ရရှိရေးဟာ တတိယလှိုင်းမှာ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းပါပဲ။ မှန်ကန်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်များကပဲ ပြည်သူများအနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးများကို မှန်မှန်ကန်ကန် ကျင့်သုံးနိုင်အောင်၊ မှန်ကန်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်နိုင်အောင် စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
မေး- ၀န်ကြီးကို အခုအငြိမ်းစားယူသွားတဲ့ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဟောင်း ဦးအောင်ကြည်ဟာ သူဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ ဒုဝန်ကြီးအဖြစ် Recommend ပေးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အခုဝန်ကြီးကကော ဒုဝန်ကြီးအဖြစ် ဘယ်သူ့ကိုများ Recommend လုပ်ဖို့ ရှိပါသလဲ။
ဖြေ- ကျွန်တော့်ကို ဒုတိယ၀န်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ပေးဖို့ ဘယ်သူက ထောက်ခံခဲ့တယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်မသိပါဘူး။ ၀န်ကြီးဦးအောင်ကြည်ကလည်း မင်းကို ငါထောက်ခံပေးခဲ့တာလို့ တစ်ခါမှ မပြောခဲ့ပါဘူး။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ဒုတိယ၀န်ကြီး ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်းဟာ နိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့် ဖြစ်ပါတယ်။
ဖြေ- အစိုးရနဲ့ ပုဂ္ဂလိကမီဒီယာကြား အဖုအထစ်ဖြစ်တယ်လို့ သိမ်းကျုံးပြီးပြောတာထက် စာနယ်ဇင်းကျင့်ဝတ်ကို မလိုက်နာတဲ့၊ စာနယ်ဇင်းအတတ်ပညာကို အလေးမထားတဲ့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မဆန်တဲ့ မီဒီယာတချို့ကြောင့် အစိုးရနဲ့ စာနယ်ဇင်းသမားများကြားမှာ နားလည်မှုလွဲတာတွေ ဖြစ်လာတယ်လို့ ပြောတာက ပိုမှန်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီအခြေအနေကို ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက် လုပ်ဆောင်သင့်တဲ့ အခြေခံမူများကို သြဂုတ် ၁ ရက် သမ္မတကြီးနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံစာနယ်ဇင်းကောင်စီတို့ တွေ့တဲ့အချိန်မှာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီအခြေခံ အယူအဆတွေပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ကိုယ်စား စာနယ်ဇင်းကောင်စီနဲ့ နီးနီးကပ်ကပ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားပါ့မယ်။
မေး- ညွှန်ကြားရေးမှူးကနေ ဒုဝန်ကြီးအထိ နောက်သမ္မတပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဖြစ်လာတဲ့အထိ ၀န်ကြီးဟာ ဆိုရှယ်မီဒီယာကို ကောင်းကောင်းသုံးစွဲခဲ့တယ်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးစွဲမှုများကနေ ၀န်ကြီးကို ထောက်ခံအားပေးမှုရော ဝေဖန်ပုတ်ခတ်မှုတွေကိုပါ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။ အခုပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဖြစ်လာချိန်မှာ ဒီဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးစွဲမှုတွေကို ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ သုံးစွဲသွားဖို့ ရှိပါသလဲ။
ဖြေ- ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှာ စတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်တာ ညွှန်ကြားရေးမှူးအဆင့်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ကနေ စတာဝန်ယူခဲ့တာပါ။ ဆိုရှယ်မီဒီယာကို စသုံးတာကတော့ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဘ၀ကဖြစ်ပြီး ဒုတိယ၀န်ကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ ပြည်သူတွေနဲ့ တိုက်ရိုက်ထိတွေ့နိုင်ဖို့အတွက် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သုံးခဲ့တာပါ။ ၀န်ကြီးဘ၀မှာလည်း ရနိုင်သလောက် အချိန်ပေးပြီး သုံးမှာပါ။ ကျွန်တော်ဆို ရှယ်မီဒီယာကိုသုံးတာ ရည်ရွယ်ချက်နှစ်ခုရှိတယ်။ ပထမရည်ရွယ်ချက်က ပြည်သူတွေဆီက သတင်းအချက်အလက်တွေကို တိုက်ရိုက်ရယူနိုင်ဖို့ပဲ။ ဒုတိယရည်ရွယ်ချက်ကတော့ တချို့မီဒီယာတွေက အစိုးရမူဝါဒများ၊ လုပ်ဆောင်ချက်များကို လိုသလို ပုံဖော်ရေးမှု၊ တစ်ခါတလေမရေးဘဲ သတင်းမှောင်ချထားမှုတွေကို ကျော်လွှားပြီး ပြည်သူကို တိုက်ရိုက်အသိပေးနိုင်ဖို့ပါ။
မေး- ၀န်ကြီးကို ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား ဖြစ်တယ်။ ပိတောက်မြေရေဒီယိုဟာ ၀န်ကြီး အဓိကကိုင်တွယ်ခဲ့ပြီး ၀ါဒဖြန့်မှုတွေ လုပ်ခဲ့တယ်။ နောက်နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွေမှာ အစိုးရ၀ါဒဖြန့်ဆောင်းပါးတွေ များစွာရေးခဲ့တယ် စသဖြင့် ၀န်ကြီးကို တံဆိပ်ကပ်မှုတွေ အရမ်းများပါတယ်။ ဒါတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ၀န်ကြီးက ဘာများပြောလိုပါသလဲ။
ဒီရာထူးမရလည်း ကျွန်တော် ပြောနိုင်တဲ့နေရာကနေ အခုပြောနေတဲ့စကားတွေပဲ ပြောမှာပဲ။ ကျွန်တော်မယုံကြည်ဘူးဆိုရင် ဓားမိုးပြီးပြောခိုင်းလည်း မပြောဘူး။
မေး- အခုဖြစ်ထားတဲ့ ပုံနှိပ်စက်ကိစ္စကြောင့် ဦးအောင်ကြည်အနားယူသွားရတယ်လို့ ပြောဆိုမှုတွေရှိပါတယ်။ ဒီပုံနှိပ်စက်ကိစ္စကကော အခု ဘယ်အဆင့်ရောက်နေပါပြီလဲ။
ဖြေ- ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်ကြည် အနားယူတာဟာ ပုံနှိပ်စက်ကိစ္စနဲ့ လုံးဝမပတ်သက်ဘူး။ ပုံနှိပ်စက်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောခဲ့သလိုပဲ စာနယ်ဇင်းကောင်စီက ဖြေရှင်းပေးဖို့ ကျွန်တော်တို့တင်ပြခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ အလဲဗင်းမီဒီယာက စာနယ်ဇင်းကောင်စီရဲ့ ဖိတ်ကြားမှုကို လက်မခံခဲ့တဲ့အတွက် ကောင်စီက ဖြေရှင်းပေးနိုင်ခြင်းမရှိဘူး။ ဒီတော့ ဌာနရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာအတွက် ကျွန်တော်တို့ လုပ်သင့်တာကို ဆက်လုပ်မှာပါ။ ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတာတော့ မပြောနိုင်ပါဘူး။
11:00 သတင်း 1 comment
”နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပြေလည်အောင် ပွဲစားပဲ လုပ် ပေးမယ်။ ဝန်ကြီးနေရာတော့ ကျွန်တော်မလုပ်ဘူး”
”ဘာကြောင့် မလုပ်ချင်လဲဆိုတော့ ကျွန်တော် လုပ်ပိုင်ခွင့် နယ်နိမိတ်ကျဉ်းသွားမယ်။ တိုင်းပြည် ချို့ယွင်းနေတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့က နိုင်သလောက် လုပ်ရမယ့် တာဝန်တွေရှိတယ်” ဟု ဇာဂနာက ပြော သည်။
ဇာဂနာသည် ဇူလိုင်လ ၁၂ ရက်နေ့တွင် အနု ပညာရှင်များနှင့် သမ္မတကြီးတို့ တွေ့ဆုံရန်စီစဉ်ပေး ခဲ့ပြီး သြဂုတ်လ ၁ ရက်တွင် မီဒီယာအဖွဲ့အစည်း နှင့် သမ္မတတွေ့ ဆုံနိုင်ရန် စီစဉ်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရ သည်။
”ဘာကြောင့် သမ္မတနဲ့ မီဒီယာကို ဆုံတွေ့ ပေးတာလဲဆိုတော့ အနုပညာရှင်တွေနဲ့ သမ္မတ တွေ့ဆုံတဲ့နေ့က မီဒီယာသမားတချို့က အဲဒီနေ့မှာ ပါးစပ်ကို ကြက်ခြေခတ် ပုံစံလုပ်ပြီး ဆန္ဒပြခဲ့တယ်။ ဒါကို သမ္မတကြီးက ကိုယ်တိုင်သွားပြီး လက်ဆွဲနှုတ် ဆက်ပြီးဘာဖြစ်ကြတာလဲဗျာ ကျွန်တော့်ကို ပြောပါ ဦးလို့ ပြောရင် မကောင်းဘူးလား။ ကျွန်တော်သာ သမ္မတကြီးဆိုရင် အဲဒီလိုလုပ်မှာ အမှန်ပဲ။ အဲဒီလို မဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက် စိတ်မကောင်းဘူး။ တွေ့ဖြစ်အောင် ကို လုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီး လုပ်တာပါ” ဟု ဇာဂနာက ရှင်းပြသည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် (၄၇) နှစ်မြောက် အာဆီယံနေ့ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက် မိန့်ခွန်းပြောကြား
09:00 မိန့်ခွန်းများ, သမ္မတ ကြီးသတင်း No comments
နေပြည်တော် သြဂုတ် ၆
၂၀၁၄ ခုနှစ် သြဂုတ် ၈ ရက်တွင် ကျရောက်မည့် (၄၇) နှစ်မြောက် အာဆီယံနေ့ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားကို ယနေ့ နံနက် ၉ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ မြန်မာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း ဗဟိုဌာန (MICC II) ၌ ကျင်းပရာ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် တက်ရောက် မိန့်ခွန်းပြောကြားသည်။
အာဆီယံနေ့ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားသို့ ဒုတိယသမ္မတ ဒေါက်တာစိုင်းမောက်ခမ်း၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်အောင်မြင့်၊ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်၊ နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ ခုံရုံး ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမြသိန်း၊ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး၊ အာဆီယံ အသိုက်အဝန်း မဏ္ဍိုင်သုံးရပ်မှ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများနှင့် ဇနီးများ၊ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးများ၊ ဒုတိယဝန်ကြီးများ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အာဆီယံ သံအမတ်ကြီးများနှင့် ဇနီးများ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နိုင်ငံခြား သံအမတ်ကြီးများ၊ သံတမန်များ၊ ကုလသမဂ္ဂနှင့် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများမှ ဌာနေ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသမီးရေးရာ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်မြမြ၊ မြန်မာနိုင်ငံ မိခင်နှင့်ကလေး စောင့်ရှောက်ရေးအသင်း တွဲဖက် အတွင်းရေးမှူး (၁) ဒေါ်တင်တင်ဝင်းနှင့် ဖိတ်ကြားထားသော ဧည့်သည်တော်များ တက်ရောက်ကြသည်။
အခမ်းအနားတွင် နိုင်ငံတော် သံစုံတီးဝိုင်းနှင့် အမျိုးသား ယဉ်ကျေးမှုနှင့် အနုပညာ တက္ကသိုလ် (ရန်ကုန်) တို့မှ ကျောင်းသား ကျောင်းသူများက အာဆီယံ သီချင်းဖြင့် အခမ်းအနားကို ဖွင့်လှစ်ပေးသည်။
ထို့နောက် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က မိန့်ခွန်းပြောကြားရာတွင် အာဆီယံ အဖွဲ့ကြီး၏ (၄၇) နှစ်တာ ခရီးစဉ်ကို ပြန်လည် သုံးသပ်ကြည့်မည် ဆိုလျှင် စည်းလုံး ညီညွတ်ခြင်းနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့သည် အာဆီယံ၏ အဓိက အခြေခံ ဖြစ်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေး၊ တည်ငြိမ်ရေးနှင့် သာယာဝပြောခြင်းများအတွက် ထင်ရှားသည့် တိုးတက်ခြင်း များကိုလည်း အောင်မြင်စွာ ရရှိခဲ့သည်ကို တွေ့ရှိရပါကြောင်း၊ အာဆီယံ၏ ထူးခြားချက်မှာ ကွဲပြားခြားနားမှုများမှ တစ်ဆင့် စည်းလုံး ညီညွတ်ခြင်းကို ဖော်ဆောင်နိုင်ခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ယင်းအခြေခံစိတ်ဓါတ်များသည် အာဆီယံ၏ တန်ဖိုးနှင့် အခြေခံမူများ ဖြစ်ပြီး ယင်းအခြေခံမူများသည် အာဆီယံကို အခက်အခဲများမှ အောင်မြင်စွာ ကျော်လွှားနိုင်စေရန် လမ်းပြ ဖော်ဆောင်ပေးခဲ့ကြောင်း မိမိအနေဖြင့် ယုံကြည်ပါကြောင်း။
ယနေ့ကာလတွင် အာရှ- ပစိဖိတ်ဒေသကို မဟာဗျူဟာကျသည့် ဒေသတစ်ခု အဖြစ် မြင်တွေ့နေရပါကြောင်း၊ အာဆီယံ၏ စည်းလုံးညီညွတ်မှုသည်လည်း ပြီးခဲ့သည့် ဆယ်စု နှစ်များအတွင်း ပိုမိုသိသာစွာ တိုးတက်မြင့်မား လာခဲ့ပါကြောင်း၊ အာဆီယံ အသိုက်အဝန်း တည်ထောင်ရေးသည် အာဆီယံ၏ စည်းလုံးညီညွတ်မှုကို အခြေခံထားခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ် အာဆီယံ အလှည့်ကျ ဥက္ကဋ္ဌ တာဝန် ထမ်းဆောင်ချိန်တွင် မိမိတို့၏ ဆောင်ပုဒ်အဖြစ် "ရှေ့သို့တူညီတက်လှမ်းချီ၊ ငြိမ်းချမ်း ဝေစည် အသိုက်အဝန်းဆီ" ဆိုသည့် အနှစ်သာရ ပြည့်ဝသည့် ဦးတည်ချက်ကို ရွေးချယ် သတ်မှတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်း။
ယနေ့ ကာလသည် အာဆီယံ အသိုက်အဝန်း တည်ထောင်မှု အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရန်အတွက် အလွန်အရေးကြီးသည့် အချိန်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ အာဆီယံသည် တစစ ကြီးမားကျယ်ပြန့်လာသည့် ဒေသဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဖြစ် ပုံသဏ္ဍာန် ပြောင်းလဲ နေပြီ ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ထို့သို့ ပြောင်းလဲရာတွင် တူညီသည့် တန်ဖိုးထားရှိမှုများနှင့် တူညီသော စံချိန်စံနှုန်းများကို အပြန်အလှန် လက်ခံခဲ့ကြပြီး နိုင်ငံရေးနှင့် လုံခြုံရေး အသိုက်အဝန်း၊ စီးပွားရေး အသိုက်အဝန်း၊ လူမှုယဉ်ကျေးမှု အသိုက်အဝန်းများနှင့် တည်ဆောက်ထားသည် အာဆီယံအသိုက်အဝန်းကို တည်ထောင်နိုင်ရန် ကြိုးပမ်းလျက် ရှိပါကြောင်း။
ယနေ့ကာလတွင် ဒေသတွင်းဖြစ်ပေါ်နေသည့် အပြောင်းအလဲများကို တွေ့ရှိရမည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ မိမိတို့အနေဖြင့် ဒီမိုကရေစီနှင့် ကောင်းမွန်သည့် အုပ်ချုပ်မှုတို့နှင့် ပတ်သက်ပြီး သိရှိနားလည်မှုများ မြင့်မားလာခြင်း၊ ဒေသတွင်း နိုင်ငံများအကြား အပြန်အလှန် အမှီသဟဲပြုခြင်းများ တိုးမြင့်လာခြင်း၊ သတင်းနှင့် ဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာ များကို ပြည်သူများ လက်လှမ်းမီ အသုံးပြုလာနိုင်ခြင်း စသည့် အပြောင်းအလဲများ ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ယင်းအပြောင်းအလဲများသည် ပြည်သူများ၏ နေ့စဉ်ဘဝတွင် အပြုသဘော အကျိုးပြုမှုများ ဖြစ်ထွန်းစေပါကြောင်း၊ ထိုတိုးတက်မှု ရလဒ်ကောင်းများ ရေရှည် တည်တံ့နိုင်အောင် အာဆီယံ အသိုက်အဝန်း တည်ထောင်မှု လုပ်ငန်းစဉ်မှ မြှင့်တင် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည်ဟု မိမိအနေဖြင့် ယုံကြည်ပါကြောင်း။
၂၀၁၄ ခုနှစ် အာဆီယံအလှည့်ကျ ဥက္ကဋ္ဌအနေဖြင့် အာဆီယံအသိုက်အဝန်း ထူထောင်မှုကို သတ်မှတ်ထားသည့် အချိန်အတွင်း ပြီးမြောက်စေရန် အားပေးတိုက်တွန်းသွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ပြည်သူအခြေပြု အာဆီယံအသိုက်အဝန်း ထူထောင်မှုသည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့် အာဆီယံနိုင်ငံများအကြား စီးပွားရေး မညီမျှခြင်းများကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်မည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ယုံကြည်ပါကြောင်း၊ အာဆီယံ အသိုက်အဝန်း တည်ထောင်ရေး မျှော်မှန်းချက်များသည် ကုလသမဂ္ဂထောင်စုနှစ် ရည်မှန်းချက် အရလည်းကောင်း၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု တိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ မူဝါဒများနှင့် လည်းကောင်း ကိုက်ညီမှု ရှိပါကြောင်း။
နိုင်ငံရေးနှင့် လုံခြုံရေးအသိုက်အဝန်းအနေဖြင့် ဒေသတွင်း တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကို ကြွယ်ဝချမ်းသာရေးအတွက် အကောင် အထည်ဖော်သွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ နိုင်ငံရေးနှင့် လုံခြုံရေး အသိုက်အဝန်း လမ်းပြမြေပုံသည် ဒေသတွင်း လုံခြုံရေးနှင့် အေးချမ်း သာယာရေး မြှင့်တင်နိုင်ရန်အတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အခြေခံများ ခိုင်မာစေရေးအတွက် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ယင်းပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုမှ နေပြီး ဆွေးနွေးဖက်နိုင်ငံများ ပါဝင်သည့် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို တည်ဆောက်သွားရန် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ထိုသို့ ဆောင်ရွက်ရာတွင် သမားရိုးကျ မဟုတ်သော လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် နယ်စပ် ဖြတ်ကျော်မှုခင်းများ ဖြစ်သည့် လူကုန်ကူးမှု၊ ငွေကြေးခဝါချမှု၊ မူးယစ်ဆေးဝါး ကူးသန်း ရောင်းဝယ်မှု တိုက်ဖျက်ရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ ကူးစက်ရောဂါ တားဆီး ကာကွယ်ရေးနှင့် သဘာဝဘေးအန္တရယ် စီမံခန့်ခွဲခြင်းကဏ္ဍများတွင် ဦးစားပေး ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် သွားကြရမည်ဖြစ်ပြီး တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုလည်း မြှင့်တင်ရန် ဖြစ်ပါကြောင်း။
၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် အာဆီယံစီးပွားရေးအသိုက်အဝန်း ထူထောင်နိုင်ရန်အတွက် ဒေသ တစ်ခုလုံးကို ဈေးကွက်တစ်ခုတည်းနှင့် ထုတ်လုပ်မှု တစ်နေရာတည်း ဖြစ်ပေါ်လာစေရန် ရည်ရွယ်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါကြောင်း၊ အာဆီယံ စီးပွားရေး အသိုက်အဝန်းသည် အာဆီယံ၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သည့် ဒေသတွင်း နိုင်ငံများအကြား စီးပွားရေး ဖွံဖြိုး တိုးတက်မှု မျှတစေရန်နှင့် ဖွံဖြိုးမှုကွာဟချက် ကျဉ်းမြောင်းစေရန်အတွက် ထိထိ ရောက်ရောက် အထောက်အကူပြုလိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်ပါကြောင်း၊ အာဆီယံ ပေါင်းစည်း ဆက်သွယ်ရေး မဟာစီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်မှုနှင့် ဒေသတွင်း အလုံးစုံ စီးပွားရေး ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်မှုတို့သည် ယင်းရည်မှန်းချက်ကို အထောက်အကူ ပြုလိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်ပါကြောင်း။
လူမှုယဉ်ကျေးမှု အသိုက်အဝန်းတည်ဆောက်မှုသည် သဘာဝဘေးဒဏ် စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် လူသားချင်းစာနာ ထောက်ထားမှု အကူအညီများ ပေးအပ်မှု၊ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ရေး၊ အမျိုးသမီး၊ ကလေးသူငယ်များနှင့် ရွှေ့ပြောင်း လုပ်သား များ၏ အခွင့်အရေးများကို ကာကွယ်မြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆာင်ရွက်မှုများ၊ ကူးစက် ပြန့်ပွားစေသည့် ရောဂါများ ကာကွယ်တားဆီးရေးနှင့် ပညာရေးမြှင့်တင်မှု ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုများမှတစ်ဆင့် အာဆီယံဒေသကို တိုးတက်စေရန် အာဆီယံ အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံများအကြားတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်ရန်အတွက်လည်း လူမှု ယဉ်ကျေးမှု အသိုက်အဝန်းဆိုင်ရာ လမ်းပြမြေပုံချမှတ်ပြီး အကောင်အထည် ဖော်လျက်ရှိ်ပါကြောင်း။
အသိုက်အဝန်းတည်ထောင်ရေးဆိုင်ရာ အာဆီယံ၏ မျှော်မှန်းချက်ကို ၂၀၁၅ ခုနှစ် နှစ်ကုန်တွင် ပြီးစီးရန် ရည်မှန်းချက်ထား ရှိပါကြောင်း၊ အာဆီိယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများသည် ယင်း ရည်မှန်းချက်ကို အချိန်မီ ပြည့်မီစေရန် ကြိုးပမ်းအားထုတ်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ အာဆီယံ အနေဖြင့် မတူကွဲပြားမှုများကြားမှ စိန်ခေါ်မှုများကို အာဆီယံ၏ စည်းလုံးညီညွတ်မှု အင်အားဖြင့် အောင်မြင်စွာ ကျော်လွှား နိုင်လိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်ပါကြောင်း။
မကြာသေးသည့် ကာလအတွင်း အာဆီယံနိုင်ငံများအကြား စိတ်ထိခိုက် ကြေကွဲဖွယ်ဖြစ်ရပ်များ ဖြစ်ပွားခဲ့ပါကြောင်း၊ မလေးရှားလေကြောင်း အမှတ် ၁၇ ၏ ကြေကွဲဖွယ်ဖြစ်ရပ်ဆိုးနှင့် ဖိလစ်ပိုင်နှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံများတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်သည့် မုန်တိုင်း ကျရောက်မှုများကြောင့် အသက်အိုးအိမ်များ ဆုံးရှုံး ပျက်စီးခဲ့ရသည့် ဖြစ်ရပ်များအပေါ် မြန်မာအစိုးရနှင့် မြန်မာပြည်သူများက စာနာစိတ်ဖြင့် များစွာ စိတ်မကောင်း ဖြစ်ရပါကြောင်း၊ ယင်းကဲ့သို့ ဖြစ်ရပ်များကို ကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက် အာဆီယံ အဖွဲ့အတွင်း သာမက ဒေသတွင်း နိုင်ငံများ၊ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် အပြန်အလှန် နားလည်မှုတို့ကို မြှင့်တင်သွားကြရမည် ဖြစ်ပါကြောင်း။
၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသည် အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဦးဆောင်တာဝန်ယူလျက်ရှိရာ နှစ်လယ်ကာလသို့ ရောက်ရှိနေပြီ ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ယခုနှစ် နှစ်စမှ စတင်ပြီး အာဆီယံ အဖွဲ့ကြီး၏ ချမှတ်ထားသည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များကို အပြည့်အဝ အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာတွင် အာဆီယံဝန်ကြီးများအဆင့် အစည်းအဝေးများ၊ အဆင့်မြင့် အရာရှိကြီးများ အစည်းအဝေး များကို ကဏ္ဍစုံတွင် အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ကျင်းပလျက် ရှိပါကြောင်း၊ ၂၄ ကြိမ် မြောက် အာဆီယံ ထိပ်သီး အစည်းအဝေးကိုလည်း ယခုနှစ် မေလအတွင်းက အောင်မြင်စွာ ကျင်းပပြီးစီးခဲ့ပါကြောင်း၊ ယခုရက်ပိုင်းအတွင်းတွင် နေပြည်တော်၌ ၄၇ ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေးနှင့် ဆက်စပ်အစည်းအဝေးများ ကျင်းပတော့မည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ယင်းဝန်ကြီး အဆင့် အစည်းအဝေးများတွင် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများနှင့် ဆွေးနွေးဘက်နိုင်ငံများ ကျယ်ပြန့်စွာ ပါဝင်ကြမည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ထိုအစည်းအဝေးများမှ အကျိုးရှိသည့် ရလဒ်များကို ဖြစ်ထွန်းစေမည်ဟု မိမိအနေဖြင့် ယုံကြည်ပါကြောင်း။
မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ဒေသတွင်းတွင် အာဆီယံ၏ ဦးဆောင်မှု အခန်းကဏ္ဍကို အလေးထား ထိန်းသိမ်းပြီး အာဆီယံ၏ မူဝါဒများ၊ ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်မျာကို တာဝန်သိသည့်၊ တာဝန်ရှိသည့် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအဖြစ် ခိုင်ခိုင်မာမာ ရပ်တည်ဖော်ဆောင် သွားမည် ဖြစ်ကြောင်းကို အတည်ပြု ပြောကြားလိုပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အာဆီယံ အပေါ် မျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သည့် ရှေ့သို့ တူညီစွာ တက်လှမ်းချီပြီး ငြိမ်းချမ်းသာယာဝပြောသည့် အာဆီယံ အသိုက်အဝန်းကို တည်ထောင်ရန် မျှော်မှန်းချက်ကို အပြည့်အဝ အကောင်အထည်ဖော်သွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း ဖြင့် ပြောကြားခဲ့သည်။
ယင်းနောက် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင်က အာဆီယံအလှည့်ကျ ဥက္ကဋ္ဌ ကိုယ်စား အမှာစကား ပြောကြားသည်။
ထို့နောက် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင်က (၄၇) နှစ်မြောက် အာဆီယံနေ့ အထိမ်းအမှတ် တက္ကသိုလ်အဆင့် ဉာဏ်စမ်း ပဟေဋိပြိုင်ပွဲတွင် ဆုရရှိသူများအား လည်းကောင်း၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာကံဇော်က တက္ကသိုလ်အဆင့် စာစီစာကုံးပြိုင်ပွဲ ဆုရရှိသူများအား လည်းကောင်း၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအေးမြင့်ကြူက အထက်တန်းအဆင့် စာစီစာကုံးပြိုင်ပွဲတွင် ဆုရရှိသူ များအား လည်းကောင်း၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ဇော်မင်းအောင်က အလယ်တန်းအဆင့် စာစီစာကုံးပြိုင်ပွဲတွင် ဆုရရှိသူများအား လည်းကောင်း ဆုများ ပေးအပ်ချီးမြှင့်ကြသည်။
ထို့နောက် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနမှ အနုပညာရှင်များက We ARE ASEAN တေးသီချင်းဖြင့် သရုပ်ပြ ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ကြသည်။
ဆက်လက်၍ နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ၊ အာဆီယံနိုင်ငံများမှ သံအမတ်ကြီးများနှင့် ဆုရကျောင်းသားကျောင်းသူများသည် စုပေါင်းမှတ်တမ်းတင် ဓာတ်ပုံရိုက်ကြသည်။
ထို့နောက် နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့် တက်ရောက်လာကြသော ဧည့်သည်တော်များသည် အာဆီယံ ၁၀ နိုင်ငံမှ ရိုးရာပစ္စည်းများ၊ အာဆီယံလှုပ်ရှားမှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ၊ အာဆီယံ စာတမ်းများနှင့် ဆုရစာစီစာကုံးများ ခင်းကျင်းပြသထားမှုကို လှည့်လည် ကြည့်ရှုခဲ့ကြသည်။
တပည့်ဖြစ်သူနှင့် ဖောက်ပြန်နေသည့် လိင်ပညာပေးသင်တန်းဆရာမတစ်ဦးအား ခင်ပွန်းဖြစ်သူက ပတ်ဝန်းကျင်ကို ခေါ်ပြ၍ ရဲတိုင်
08:00 နိုင်ငံတစ်ကာ သတင်း 1 comment
အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတွေရဲ့လူမှုရေးဖောက်ပြန်မှုတွေကို ပတ်ဝန်းကျင်မှမကြာခဏ ကြားသိမြင်တွေ့နေရပါတယ်။ လက်မခံနိုင်တဲ့ ပတ်သက်မှုမျိုးတွေကြောင့် ပတ်ဝန်း ကျင်မှာဖြေရှင်းလို့မရတဲ့ လူမှုရေးပြဿနာတွေ ဖြစ်လာ ပါတယ်။ ယိုသူမရှက် မြင်သူ ရှက်တဲ့။ အိမ်ထောင်ရှင်ဖြစ်နေပါရက် ကိုယ်နဲ့ညီအစ်ကို မောင်နှမ၊ သားသမီးရင်း ခြားနဲ့မခြားနားအောင်ကိုပင် ခင်တဲ့ပတ်သက်မှုမျိုးကနေ အချင်းချင်း သစ္စာမရှိဖောက် ပြန်နေကြတဲ့သူတွေအများအပြားရယ်ပါ။
ဇင်ဘာဘွေနိုင်ငံ တက္ကသိုလ်တစ်ခုကနေပြီးတော့ မက်ဒါကတ်စကား ကျောင်းဆရာ၊ ဆရာမစုံ တွဲကို နိုင်ငံခြားဘာသာရပ်သင်တန်း ဆရာနဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပညာပေးသင် တန်းဆရာမ တို့အဖြစ် ခန့်အပ်သင်ကြားပေးရန် အခကြေးငွေဖြင့်ငှားရမ်းခဲ့ကာလအ တော်ကြာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။
တစ်ရက် ကျောင်းဆရာ အန်ဂျာရာက အိမ်ကို စောစီးစွာပြန်လာခဲ့ရာမှာ သူ့တို့ အိပ်ခန်းကုတင်ပေါ်မှာမြင်တွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့် အတော် လေး ထိတ်လန့်သွား ခဲ့ပါတော့တယ်။ ဒါကတော့ သူ့ရဲ့ ဇနီးသည်ဖြစ်သူက သူ့ရဲ့ သင်တန်းသားနဲ့ အတူ ဖောက်ပြန်နေတာပါပဲ။ ဒါကတကယ့်ကို လက်မခံလောက်တဲ့ပတ်သက်မှုမျိုးပါ။
ခင်ပွန်းဖြစ်သူရဲ့ ကျောင်းသားနဲ့တောင်ဖောက်ပြန်နေတာဆိုတော့ သူတို့နှစ်ဦး စလုံးက ဘယ်အချိန်ကတည်းက ဒီလိုမျိုး စိတ်နယ်ကျော်လာတဲ့ အထိဖြစ်လာခဲ့သလဲ ဆိုတာနဲ့ ကိုယ့်တူ၊ ကိုယ့်သား၊ ကိုယ့်တပည့်ကနေမှ ကိုယ့်စိတ်ရမ္မက်ဆန္ဒအလိုကို ဖြည့်ပေးတဲ့ အမျိုးသားတစ်ဦး အဖြစ်လက်ခံခဲ့လိုက်သလဲဆိုတာကို ဇနီးသည်အတွက် တွေးလို့တောင် မရနိုင်ပါဘူး။
အဲ့ဒါနဲ့ မစ္စတာ အန်ဂျာရာလည်း ပတ်ဝန်းကျင်က သူတွေကိုခေါ် အကူအညီတောင်း ပြီးတပည့်ဖြစ်သူနဲ့ ဇနီးသည်တို့ရဲ့ ဖောက်ပြန်အတူနေထိုင်တာကို မျက်မြင်အဖြစ် ခေါ်ပြခဲ့ကာ သူတို့နှစ်ဦးစလုံးကို တရားဥပဒေအရ အမှုဖွင့်စွဲချက်တင်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါ တယ်။